Mr Programmer (www.mr-programmer.com): 2007
Merry Christmas & Happy New Years to all of you!!
မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အလုပ်ရှာ...
သွားပိုးပေါက် အချိန်မီ မဖာထေးလျှင် အသက်အန္တရာယ် ရှိ...
အမေရိကန်တွေ နက္ခတ်ဗေဒင်ကို ယုံကြည်ကြသည်
ဘတ်စ်ကားခ မတိုးရန် မထသ ညွန်ကြား၊ မလိုက်နာသူများရှိ...
မာဒေးကားဖလားပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံ မြန်မာအသင်းနိုင်ပွဲ...
အနာဂတ်စွမ်းအင်အတွက် အသုံးဝင်သည့် Paper battery
စည်းကမ်းပျက်တဲ့ ရဲတွေ ကာတွန်းလက်ပတ် ပတ်ရမည်။
ကလေးတွေ စကားပြောတတ်မှုကို ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုနဲ့...
ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် laptop များ ထွက်ပေါ်လာတော့မည်။
နေ့စဉ်အချိုရည် တစ်ကြိမ်ထက် ပိုသောက်သူများ နှလုံးရေ...
မိုး ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။
Posted by Mr. Programmer at 12/28/2007 08:22:00 PM 1 comments
မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အလုပ်ရှာရန် စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး တိုက်တွန်း။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်ရှာဖွေလိုကြသည့် မြန်မာတို့အနေဖြင့် ပွဲစားများကိုအားကိုးခြင်း၊ အလည်အပတ်ဗီဇာဖြင့် သွားရောက်၍ အလုပ်ရှာဖွေခြင်းတို့ ပြုသည်ထက် အင်တာနက်ကို ပိုမို အားကိုးရှာဖွေသင့်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ရောဘတ်ချွားက အကြံပေးလိုက်သည်။
“လိုတဲ့အချက်တွေ အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် မှာဆိုရင် စင်ကာပူမှာ အလုပ်နဲ့ပတ် သက်တဲ့သတင်းတွေတင်ထားပါတယ်” ဟု မစ္စတာချွားက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အလုပ် ရှာဖွေရေး ပွဲစားများကို အားကိုး တတ်ကြရာ ယင်းသည် အာမခံချက်မရှိ ကြောင်း၊ စင်ကာပူကုမ္ပဏီများ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များထဲ ၀င်ကြည့်၍ အလုပ်ရှင် လိုချင်သည့် အရည်အချင်းနှင့် အချက်အလက် များကို သိရှိအောင် ကြိုးပမ်း၍ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ဆိုသည်။
“ဒါကြောင့် သူတို့ဆီကို တိုက်ရိုက် အီးမေးလ်ပို့ပါ။ တကယ်လို့ သူတို့က စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် လူတွေ့ စစ်ဆေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားနိုင်ငံကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စေလွှတ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။
ထို့ပြင် အေဂျင်စီများ၊ ပွဲစားများကို အားကိုးခြင်းသည် အမြော်အမြင် နည်းရာရောက်ကြောင်း၊ ၎င်းင်းတို့သည် ငွေ အမြောက်အမြားတောင်းပြီး အလုပ် မရသည့်အခါ စိတ်ပျက်စရာကောင်းကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ပြောသည်။
စင်ကာပူ၊ ချန်ဂီလေဆိပ်တွင် မကြာမီ ခရီးသည်ဂိတ်အမှတ် (၃) ကို ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ် သမား များခေါ်ယူလိုသည့် ကုမ္ပဏီအချို့ရှိကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီများထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ ၎င်းင်းတို့ လိုအပ်ချက်နှင့် မိမိအရည်အချင်း ကိုက်ညီပါက တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း လည်း မစ္စတာချွားက ပြောသည်။
အလည်အပတ်ဗီဇာဖြင့် စင်ကာပူသို့ ဦးစွာလာပြီးမှ အလုပ်ရှာလျှင်မူ မိမိကို အပြည့်အ၀ အကူအညီပေးနိုင်မည့် သူငယ်ချင်း၊ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးရှိမှသာ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်သည်ဟု ၎င်းင်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
“တကယ်လို့ ကိုယ်က အလည် သဘောမျိုးလာတယ်ဆိုရင် အခုမှ စရောက်တာဆိုတော့ ဘယ်သွားလို့ သွားရမှန်း မသိ ဖြစ်တတ်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အင်တာနက်ကို အားကိုးပြီး လေ့လာဖို့ပါပဲ။ အဲဒီမှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။”
“ပွဲစားကို အားကိုးတာကအာမခံချက်မရှိပါဘူး။ ဒီလောက်ပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်စရာမလိုဘူး”ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/25/2007 11:15:00 PM0comments
သွားပိုးပေါက် အချိန်မီ မဖာထေးလျှင် အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင် ။
အံဆုံးပေါက်ခြင်း၊ သွားပိုးစားပြီး သွား၌ အပေါက် ပေါက်ခြင်း တို့ကို အချိန်မီ ပြုပြင်ဖာထေးခြင်း မပြုပါက အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခနှင့် ဌာနမ·း ဒေါက်တာ ဦးကိုကိုမောင်က ဆိုသည်။
“သွားပိုးပေါက်ဖြစ်နေတာကို အချိန်မီ မဖာထေးဘူးဆိုရင် သွားပိုးက အမြစ်ထိပ်ကနေ မေးရိုးဖောက်ပြီး လည်ပင်း အောက်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားမျှင်ထဲကို ၀င်သွားတယ်။ ဒီလို ၀င်သွားရင် ပိုးတွေ ကထုတ်တဲ့ အင်ဇိုင်းဓာတ်ကြောင့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်နေတဲ့ ကြွက်သား ဆဲလ်တွေကွာသွားပြီး အဆိပ်တွေက အထဲကို ပြန့်ဝင်သွားတယ်။ အဲဒီလို အဆိပ် တွေပြန့်သွားရင် မေးရိုးအောက်၊ လျှာအောက်တွေမှာ ရောင်လာပြီး လည်ပင်းက သစ်သားလိုမာလာတယ်။ လျှာ အောက်ကို ပိုးက ၀င်တဲ့အတွက် လျှာက အပေါ်မြင့် တက်လာပြီး ရေ မသောက်နိုင်၊ အသက်မရှူနိုင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ပြီးအသက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်”ဟု ၎င်းင်းက ရှင်းပြသည်။
အံဆုံးပေါက်မည့်နေရာတွင်လည်း သွားဖုံးအသားက အုပ်နေသည့်အတွက် အတွင်း၌ ပိုးဝင်ရောက်နေတတ်ပြီး ပိုးက အောက်ခြေဆင်းကာ နေရာအနှံ့ ပိုမိုပျံ့နှံ့လွယ်ကြောင်း ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ သွားပိုးပေါက်ခြင်း၊ အံဆုံး ပေါက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းသည် ဆီးချိုရောဂါသည်များနှင့် ကိုယ်ခံအား ကျနေသူများတွင် ပိုမိုဖြစ်လွယ်ကြောင်း ဒေါက်တာဦးကိုကိုမောင်က ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေက သွားကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ပိုးပေါက်နေတဲ့သွားက ကျဉ်နေပြီ၊ နာနေပြီဆိုတာတောင် ဂရု မစိုက်ကြဘဲ ဆေးမြီးတိုနဲ့ကုတော့ အခု လိုဖြစ်ကြရတာ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/25/2007 11:00:00 PM0comments
ချောင်းဆိုးသွေးပါအဆုတ်တီဘီရောဂါကို ကမ္ဘာ့ကူးစက်ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခု အဖြစ် သိရှိကြသော်လည်း ၎င်းင်းနှင့် ဆက်နွှယ်ဖြစ်ပေါ်သည့် အရိုးတီဘီ ရောဂါအကြောင်းကိုမူ သိရှိသူ အလွန် နည်းပါးနေသေးကြောင်း မြောက် ဥက္ကလာပ အထွေထွေဆေးရုံကြီးမှ အရိုး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြသောင်းက ပြောသည်။
တီဘီရောဂါ ခံစားရသူများ၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အဆုတ်တွင် မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အခြားနေရာများတွင် ဖြစ် ပေါ်တတ်ပြီး ၎င်းရာခိုင်နှုန်း တစ်ဝက် မှာ အရိုးအဆစ်တီဘီရောဂါ ဖြစ်သည်။
“ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အရိုးအဆစ် မှာ တီဘီဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိပ်မသိကြဘူး။ ဒီရောဂါဖြစ်တဲ့သူ တချို့နဲ့ နီးစပ် တဲ့လူတွေပဲ ဒီရောဂါအကြောင်း သိကြ တာ။ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ တီဘီရောဂါ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာမရှိဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြားကနေပြီး ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အထိ တီဘီရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။ အရိုး အဆစ်နဲ့ အဆုတ်တီဘီရောဂါပိုးချင်း တူပေမယ့် ရောဂါဖြစ်စဉ် ကွဲပြားပါ တယ်”ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ အရိုးတီဘီရောဂါသည် အသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်နိုင်သော်လည်း ရောဂါဖြစ်စဉ်ကို အချိန်မီ မဖော်ထုတ် နိုင်ပါက ကုသမှုနောက်ကျပြီး ခါးရိုးဘုကြီးနှင့် ခါးကုန်းကာ တစ်သက် လုံးဒုက္ခိတဖြစ်တတ်ကြောင်းသိရသည်။
အရိုးတီဘီရောဂါလက္ခဏာများမှာ တချို့တွင် အရိုးအဆစ်နာသကဲ့သို့ သာမန်ရောဂါလက္ခဏာပြကာ ရောဂါ ပိုးက အရိုးများကို လှိုက်စားသွားတတ်ပြီး အချို့တွင် အရိုးအဆစ်တွင်း ပြည်တည်၍အဆစ်ရောင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
“တချို့ အရိုးတီဘီလက္ခဏာတွေဆို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တာတောင် မတွေ့နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ လူနာက ကိုယ် တစ်ခုခုအလေးအပင်မမိလို့ ထင်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကြာပြီး နောက်ကျမှ ကုမိလို့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။”
“ပြည်သူတွေ သတိထားရမှာက တီဘီရောဂါကို ဆရာဝန်တိုင်း ကုတတ်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ကုနည်းမှားနေတဲ့ သူတွေအများကြီးပဲ။ အဆစ်အိမ်မှာ နာကျင်ပြီး သာမန်ပိုးသတ်ဆေးသောက် လို့ မပျောက်နိုင်ဘူး၊ ကာလအတန် ကြာ အနားယူတဲ့အထိ မပျောက်ကင်းရင် တီဘီရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ဒေါက်တာမြသောင်းက ပြောသည်။
အရိုးတီဘီမှာ အနည်းဆုံး ဆေး တစ်နှစ် သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာမြသောင်းက အရိုးတီဘီ သည် ခွဲစိတ်ကုသစရာ မလိုဟု အချို့ ဂျာနယ်များတွင် ရေးသားထားသည်မှာ မှားယွင်းပြီး လူနာအတွက် အလွန် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပြောသည်။
“တီဘီရောဂါကို အဓိကကုသရမှာကတော့ သောက်ဆေးပါ။ ခွဲစိတ်ကုသတာဟာလည်း ပျောက်ကင်းတဲ့နည်းလမ်း မ¸ုတ်ဘူးဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့် မှန်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာနေ၀င်းကမူ ၎င်းင်းအရိုး အဆစ်တီဘီတွင် ခါးရိုးတီဘီဖြစ်ပွားသူ ဦးရေ များလာသော်လည်း ပြည်သူတို့ အနေဖြင့် အခြားအကိုက်အခဲ အဆစ် ရောင်ရောဂါဟု ထင်မှတ်ကုသနေကြောင်း ပြောသည်။
“ဒီခါးရိုးတီဘီက သုံးနှစ်နဲ့ ငါးနှစ် ကလေးတွေ၊ အသက် ၄၀ ကျော်တွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ ကလေးဆိုရင် ညညငို မယ်။ တရှောင်ရှောင်နဲ့ အစား အသောက်ပျက်ပြီး မလန်းဆန်းရင်၊ သူ့ကျောပေါ်မှာ အဖုအကျိတ်တွေ့ မယ်ဆိုရင် ဒီကလေးဟာ ခါးရိုးတီဘီ ခံစားနေရတာပါ”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ အရိုးတီဘီရောဂါသည်တီဘီ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ပုံမှန် မသောက် သုံးခဲ့သောသူများ၊ တီဘီ ရောဂါလူနာ နှင့် နီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ရသူများ၊ ခန္ဓာ ကိုယ် တစ်နေရာတွင် တီဘီရောဂါ ဖြစ် ခဲ့ဖူးသူများ၊ နာတာရှည် ရောဂါခံစား နေရပြီး ခုခံအားကျနေသူများတွင် ပိုမိုဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြသောင်းက ပြောသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/25/2007 10:57:00 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်မျက်စိကွယ်နိုင်သည့် လူဦးရေသည် ခြောက်သောင်းမှ ကိုးသောင်းကျော်အထိရှိနေပြီး အတွင်း တိမ်ရောဂါသည် မျက်စိကွယ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ရှိနေသည်။
“အတွင်းတိမ်ရောဂါဟာ မျက်စိ ကွယ်မှုအားလုံးရဲ့ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိနေပါတယ်”ဟု မျက်စိအထူးကု ဆရာ ၀န်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာ မြအောင်က ဆိုသည်။
ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများ အရ အတွင်းတိမ်ရောဂါပြီးနောက် ရေတိမ်ရောဂါ၊ မျက်စိအနောက်ပိုင်း ရောဂါ၊ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ၊ မျက်ကြည် လွှာရောဂါနှင့် မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာ များသည် မျက်စိကွယ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများတွင် အစဉ်လိုက်ရှိ ကြသည်။
ဒေါက်တာမြအောင်က ယခု နောက် ပိုင်းတွင် ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ တို့ကြောင့်ဖြစ်သည့် နောက်ဆက်တွဲ မျက်စိရောဂါများလည်း အဖြစ်များလာကြောင်း နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော ၎င်းင်းအသင်း၏ ၁၉ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ၌ ပြောကြားသည်။
“ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ၁၉၉၇-၉၈ မျက်ခမ်းစပ်နှင့် မျက်မမြင် ကာကွယ်ရေး စီမံချက်စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မျက်မမြင်ဦးရေ ခုနစ် သိန်းကျော်ရှိပြီး အဲဒီဦးရေအရ လူဦးရေ တစ်သိန်းမှာ ၆၀၀ လောက် မျက်စိ ကွယ်နေ တယ်”ဟု ၎င်းင်းက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာမြအောင်က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် ၂၀၀ ကျော်ရှိသည့်အတွက် လူဦးရေ သုံးသိန်း၌ တစ်ဦးနှုန်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တွေအားလုံးက တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို အတွင်းတိမ် ရောဂါဝေဒနာရှင် သုံးသောင်းလောက် ခွဲစိတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး မျက်စိကုဌာနတွေ မရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေကိုလည်း နယ်ထွက် ခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်ပြီး ခွဲစိတ် ကုသပေးခဲ့တယ်”ဟု ၎င်းင်းက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာမြအောင်က မှတ်တမ်းများအရ ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီး တစ်ခုတည်းပင်လျှင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ သွားရောက်ခဲ့သည့် နယ်ခရီးစဉ်များ၌ စုစုပေါင်း မျက်စိ ဝေဒနာရှင် ၄၅ç၀၀၀ ခန့် ခွဲစိတ်ကုသ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းင်းတွင်အတွင်းတိမ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင် ၇ç၀၀၀ နီးပါး ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
မျက်ခမ်းစပ်နှင့် မျက်မမြင်ကာကွယ် ရေးစီမံချက် မန်နေဂျာဒေါက်တာ ခင်ငြိမ်းလင်းကလည်း ယခင်က မြန်မာ နိုင်ငံတွင် မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါသည် မျက်စိကွယ်စေသည့် အဓိကအကြောင်း ရင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွား နှုန်းသည် လူ ၁ç၀၀၀ တွင် တစ်ဦးမှ ငါးဦးနှုန်းအထိသာရှိတော့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“စီမံချက်အနေနဲ့ ရှေ့တက်လာတဲ့ မျက်စိကွယ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ပြင်ပလူနာကြည့်ရှုခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသ ခြင်း၊ ကျေးရွာအရောက် မျက်စိကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးမှာ စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူ ဆန်းစစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ၎င်းင်းက ဆိုသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/25/2007 10:53:00 PM0comments
အမေရိကန်လူမျိုး အများစုသည် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ကြပြီး အတော်များများ အရေအတွက်ကလည်း အာကာသတွင်းမှ အမျိုးအမည်မသိ ယာဉ်ပျံများ၊ မာရ်နတ်နှင့် တစ္ဆေများ အမှန်တကယ်ရှိကြသည်ဟု ယူဆ ကြကြောင်း လူထုသဘောထား စစ်တမ်းတစ်ခုက အင်္ဂါနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီး အမေရိကန် ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပြီး ထို့ထက် အနည်းငယ်သာ လျော့နည်းသည့် ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းက တန်ခိုးပြာဋိဟာများကို ယုံကြည်ကြကြောင်း ဟဲရစ်အွန်လိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာသုံးသပ်ချက်၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၃ ရက် နေ့များအကြား အရွယ်ရောက်ပြီး အမေရိကန် ၂ç၄၅၅ ယောက်အား မေးမြန်း မှုပြုခဲ့ရာတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ကောင်းကင်ဘုံနှင့် နတ်မိမယ် တို့ရှိသည်ကို ယုံကြည်ကြောင်း ဖြေကြား ပြီး ၁၀ ယောက်တွင် ခြောက်ယောက်ကျော်တို့က ငရဲနှင့် မာရ်နတ်ရှိကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒါဝင်၏ သီအိုရီဖြစ်သည့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ယုံကြည်ကြသူ ၄၂ ရာခိုင် နှုန်းရှိပြီး လူသားကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည့် လူများမှာ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ဘာသာရေးယုံကြည်သူ အမေရိကန် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအနက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းင်းတို့ အလွန်ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသည်ဟု ပြောကြပြီး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းက အတော်အတန်ကိုင်းရှိုင်း သည်ဟု ဆိုကြသည်။
သဘောထားစစ်တမ်း ကောက်ခံရ သူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံတို့က အာကာသမှ အမျိုးအမည်မသိ ယာဉ်ပျံများ၊ စုန်း ကဝေများနှင့် နက္ခတ်ဗေဒင်တို့ကို ယုံကြည်ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by Mr. Programmer at 12/25/2007 10:46:00 PM0comments
Posted by Mr. Programmer at 10/31/2007 10:15:00 AM0comments
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ဘောလိဝုဒ် ပထမဆုံးပူးပေါင်းရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်။
ဘောလိဝုဒ်မှာ ရိုက်ကူးတဲ့ Goal ရုပ်ရှင်ကို ဒီလကုန်မှာ ပြသ တော့မှာဖြစ်ရာ ဒီရုပ်ရှင်ကားပေါက်သွား ဖို့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံး အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းထားတယ်။
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဂျွန်အေဘရာဟင်ဟာ အင်္ဂလိပ် ပရီမီယာလိဂ် ချန်ပီယံအသင်းရဲ့ လှုံ့ဆော်နိုးကြားမှုကို ခံယူထားတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် အဖြစ်ပါဝင်ထားတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကို မန်ယူကလပ် နဲ့ တွဲဖက်ထားတာ အလွန်ကောင်းပါ တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်း က ဘောလုံးကစားတာကို အသည်းစွဲ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကတည်းက မန်ယူ အသင်းကို လေးစားမြတ်နိုးခဲ့တယ်" The Times of India ကို အေဘရာဟင်က အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ မန်ယူဘောလုံးအသင်းအနေ နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် အိန္ဒိယရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လိွု့သေူ ဒါရိုက် တာ ဗီဗက်အဂ္ဂနီဟိုထရီက ပြောပါတယ်။
မန်ယူဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥပစာမှာ လည်း ဒီရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ခဲ့ရာ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်အတွက် ပထမဆုံးပဲလို့ အဂ္ဂနီ ဟိုထရီက ပြောတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေး ကြော်ငြာတွေမှာ အင်္ဂလန်က ၀ိန်းရွန်နေနဲ့ ပေါ်တူဂီက ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့လည်း ပါဝင် တယ်လို့ The Time of India က ပြောတယ်။
အေဘရာဟင်ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အင်မတန်မှ မျက်စိကျလောက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် Bipasha Basu လည်း Goalထဲမှာ ပါဝင်တယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘောလုံးပွဲတွေ အနိုင်မကစားနိုင်ရင် အသင်းပိတ်ပစ် ရတော့မယ့် အခြေအနေဆိုက်နေတဲ့ ဘောလုံးကလပ်အသင်း တစ်သင်း အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်။
အသင်းမန်နေဂျာက သူ့ရဲ့ဘောလုံး သမားတွေကို မန်ချက်စတာယူနိုက် တက်အသင်းဆီကို ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ အစဉ်အလာဖြစ်တဲ့ ကခုန် ကြဖို့မဟုတ်ဘဲ စိတ်တက်ကြွလာအောင် ခေါ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြ ထားတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 10/30/2007 10:18:00 PM0comments
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ လိုဏ်ဂူတစ်ဂူတွင် ဥရောပကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ခြောက်ဦးနှင့် ထိုင်းဧည့်လမ်းညွှန် နှစ်ဦးတို့ ၀င်ရောက်လေ့လာလျက်ရှိကြစဉ် ရုတ်တရက် ရေကြီးလာသဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ က ပြောကြားလိုက်သည်။
အားလပ်ရက်ခရီးထွက်သူများသည် ပြီးခဲ့သောစနေနေ့တွင် ခအိုဆော့အမျိုးသားဥယျာဉ်၌ ၎င်းင်းတို့၏ ဧည့်လမ်းညွှန် များနှင့်အတူ ခြေကျင်ခရီးကြမ်းထွက်ကြစဉ် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ၎င်းင်းလိုဏ်ဂူအတွင်းရှိ စမ်းချောင်းမှာ ရုတ်တရက် ရေတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီး တနင်္ဂနွေ နေ့က ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အလောင်းရှစ်လောင်းကို ရေထဲမှ ဆယ်ယူရရှိ ခဲ့ကြောင်း ခရိုင်အရာရှိ စီးတီးချိုင်းထိုင်းချာရွန်းက ပြောသည်။
]]အခုတော့ အလောင်းတွေကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ခွဲလို့ ရပါပြီ။ ၁၀ နှစ်သား ဂျာမန်လူငယ်လေးတစ်ယောက်၊ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်၊ ဆွစ်အမျိုး သားတစ်ယောက်နဲ့ ဆွစ်အမျိုးသမီး သုံးယောက်ပါ}}ဟု ၎င်းင်းက အေအက်ဖ်ပီကို ပြောသည်။
]]အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူက အင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူကတော့ အခြေအနေ အတော်ကောင်းပါတယ်။ လိုဏ်ဂူထိပ်ကို တက်နိုင်ခဲ့လို့ အသက်မသေဘဲ လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ သူ့ကို ဆေးကုသပေးဖို့အတွက် ပြည်နယ် ဆေးရုံကို ပို့ထားပါပြီ}}ဟု ၎င်းင်းက ဆိုသည်။
ခအိုဆော့ အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် ဘန်ကောက်မြို့မှ တောင်ဘက် ၆၄၅ ကီလို မီတာ(မိုင် ၄၀၀)အကွာ ဆူရတ် ဌာနီပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။
၎င်းင်းဥယျာဉ်သည် ကြီးမားသော ရေကန်၊ ထူထပ်သော သစ်တော၊ ထုံးကျောက် တောင်ကမ်းပါးများနှင့် လိုဏ်ဂူ အမြောက်အမြားတည်ရှိမှုတို့ကြောင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၂၀ç၀၀၀ ကျော် လာရောက်ခဲ့ပြီး ခြေကျင်ခရီးကြမ်း ထွက်သူများအတွက် အထူးရေပန်းစားသော ခရီးပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဒေသန္တရခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုက ဆိုသည်။
Posted by Mr. Programmer at 10/30/2007 10:13:00 PM0comments
ယောက်ျားသဘာဝ ပန်းသေပန်းညှိုးပျောက်ဆေးများဖြစ်သော Viagra ၊ Cialis နှင့် Levitra ဆေးဝါးများနှင့် နားအကြားချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်တို့ ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်စီမန်ရေး အဖွဲ့ကြီးကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရုတ်တရက် အကြားအာရုံချို့ယွင်းသွားပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလည်း ညွန်ကြားထားသည်။ အချို့သောသူများတွင် ယခုကဲ့သို့ဆေးဝါးများမှီဝဲပြီးပါက အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်လာသည်။
Posted by Mr. Programmer at 10/30/2007 10:07:00 PM0comments
ကလေးမွေးဖွားနှုန်းနှင့် HIV ရောဂါထိန်းချုပ်မှုအတွက် တောင်အာဖရိကအစိုးရကနှစ်စဉ် ကွန်ဒုံးသန်း ၄၀၀ ကို အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေသည်။
သို့သော် မကြာသေးမီက Kohrs Medical Supply မှအစိုးရထံပေးသွင်းနေသော ကွန်ဒုံးများသည် စိတ်ချရမှုမရှိကြောင်း စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့၍ ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ဩဂုတ်လကလည်း Zalatar ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော ကွန်ဒုံးသန်း ၂၀ ကိုစိတ်မချရ၍ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ဘူးသည်။
တောင်အာဖရိကတွင် HIV ရောဂါစွဲကပ်နေသူပေါင်း ၅ သန်းကျော်ရှိသည်။ အစိုးရကမူ အဆိုပါကုမ္ပဏီများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့သည်။ Source: Phatpa
Posted by Mr. Programmer at 10/30/2007 09:43:00 PM0comments
အိပ်စက်နားနေမှုမရရှိပါက လူ၏ဦးနှောက်သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုလွန်ကဲတတ်ကြောင်းကို ဦးနှောက် scans ဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောသည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းစမ်းသပ်ခံများကို ၃၅ နာရီကြာမအိပ်စက်စေပဲ functional magnetic resonance imaging (FMRI) ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်ရာတွင် ဦးနှောက်တွင်သွေးလည်ပတ် စီးဆင်းမှုနှင့် ဦးနှောက်၏မည်သည့်အစိပ်အပိုင်း အတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည် တို့ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆို်င်ရာ ဦးနှောက်တွင်းမှ တုန့်ပြန်မှုအစိပ်အပိုင်း amygdale သည်ပို၍ ပြင်းထန်သော တုန့်ပြန်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတွေ့ရှိမှုမှလည်း အိပ်စက်မှုနှင့် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကစဉ်ကလျားဖြစ်မှုကို ဆက်စပ်မှုကို အခုသုတေသနတွေ့ရှိချက်က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ Source: Phatpa
Posted by Mr. Programmer at 10/30/2007 09:42:00 PM0comments
Considering the Move to Team Leader or IT Manager?
If you are consideringacareer move from healthcare IT team member into team leader, IT manager, or even CIO, here is an interesting article to read and ponder. It provides an interesting quiz (of sorts) that, in my opinion, seems to capture the pros and cons of beingamanager in any industry.
Motivation: At some point almost every healthcare IT team member — say an interface engine analyst atahospital/clinic or HL7 implementation/support person atasoftware vendor — will consideramove into management. The first and hardest move, IMO, is being the team leader — you are expected to continue doing “real work” (building interfaces, troubleshooting issues, maybe even carrying the on-call pager) and at the same time you are asked to be Mr. (or Ms.) Manager. You are truly stuck in the middle of being both “one of the gang” and being “in charge” at the same time. This article outlines the challenges pretty well — read before you leap.
John McKee is the author of two books and blogs weekly (Success Coach) on TechRepublic. Here are his 10 signs that you’re not cut out to be an IT manager.
At one time or another, most of us will come toapoint in our lives when it’s time to determine our next step. Asabusiness and success coach, I often hear from people who are wondering if it’s time to makeachange in their lives.
-You haveareal desire to be liked
-You prefer to avoid the spotlight and just beapart of the gang
-Every time you are called on to comment about the topic being discussed, you experience short-term memory loss
-Havingatough conversation with an employee causes youagreat deal of duress
-You don’t like to make tough decisions
-Being stuck in the middle between the leaders and the team makes your stomach churn
-You prefer to keepalow profile, just doing your job; when people look at you, it reminds you how many flaws you have
-Havingaverbal duel inameeting isn’t your idea of fun and you feel uncomfortable standing up to communicate inameeting
-You dislike having to work hours beyond the “regular” schedule
-You could never fire someone because after all, everyone needsajob
Posted by Mr. Programmer at 10/19/2007 04:43:00 PM0comments
Posted by Mr. Programmer at 10/18/2007 07:21:00 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း အတွင်း က စစ်တပ်မှ သေနတ်ဖြင့် အပြစ်ခံခဲ့ရ၍ သေဆုံးသွားသော ဂျပန် သတင်းထောက် ကိစ္စစုံစမ်းရန် နှင့် စိတ်ဆိုးနေသော ဂျပန်များ၏ စိတ်ကို ပြေပျောက် စေရန် ဂျပန် ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယခု သတင်းပတ်အတွင်း ရန်ကုန် သို့သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/29/2007 09:45:00 AM 1 comments
First among equals in the current regime is Senior Gen. Than Shwe. He is said to be superstitious and to consult with astrologers, but otherwise hasapublic image that is taciturn in the extreme. No.2is Deputy Senior Gen. Maung Aye, 69, whose reputation is, if anything, more ruthless than Than Shwe's, probably because he has more field combat experience from fighting ethnic rebels. Soldiers in the 400,000-strong military live secluded from civilian life in isolated barracks; their families are provided with housing as well.
HOW THEY CAME TO POWER
The State Peace and Development Council, as the ruling junta is formally known, replaced another dictatorship in 1988 after suppressingapro-democracy uprising. The previous regime, led by Ne Win, destroyed what had been one of Southeast Asia's most dynamic economies, restricting tourist visas to one week and refusing all foreign investment.
HOW THEY KEEP THEIR POWER
Than Shwe's government has opened up the country to foreign investment. Myanmar is rich in natural resources, and has survived by cultivating investment in its potentially vast oil and gas reserves. Neighboring China and India curry favor with the junta because of Myanmar's strategic location on the Indian Ocean and its oil and natural gas resources. China is the regime's main ally, supplying the most aid and diplomatic muscle at international forums.
PREVIOUS RESISTENCE TO THEIR RULE
In 1988, the army violently suppressed mass demonstrations against 26 years of military dictatorship, though some members of the air force changed sides and supported the protesters. Monk-led street protests threatened the junta's power again after the government refused to accept the outcome ofa1990 vote, in which Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi's pro-democracy party took control of parliament. The regime responded with several months of raids on hundreds of pagodas and the arrests of hundreds of monks.
Posted by Mr. Programmer at 9/29/2007 09:22:00 AM0comments
လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှုလုပ်ရန် Rice တောင်းဆို။
US secretary Condoleeze Rice က ယခုသောကြာနေ့ ၌ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ မြန်မာပြည်၏ လူမဆန်သော အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
"Given what is going on in the streets in Rangoon (Yangon), I would have hoped that the Security Council would takeastronger action," she said here afteraluncheon with her counterparts from the four other veto-wielding members of the UN Security Council.
Council members, however, expressed "strong support" for UN chief Ban Ki-moon's decision to end his envoy Ibrahim Gambari to Myanmar, expressed "concern" about the government crackdown and called for "restraint."
Rice also welcomed Gambari's mission, adding: "There needs to be immediatelyastop to the violence against innocent people."
After her luncheon with her counterparts from Britain, China, France and Russia, she told reporters: "We are unanimous in insisting that the regime in Burma (Myanmar) receive him (Gambari) and accede to all of his requests, including to see (detained democracy icon) Aung San Suu Kyi and to talk to members of the political opposition."
Posted by Mr. Programmer at 9/29/2007 09:17:00 AM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မိသားစုများ နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ပြေးသည် ဆိုသော ကောလာဟလများ မြန်မာလူထု အကြား ရေပန်းစားနေချိန် ဦးတေဇပိုင် အဲယား ပုဂံ လေယာဉ် တစီးကို လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျင်းတွင် ရပ်နားထားသည်ဟု တွေ့မြင်ခဲ့ရသူများက မဇ္ဈိမ သို့ အကြောင်းကြားခဲ့ သည်။
ထပ်မံ စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာ ယနေ့ညနေ လာအို စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီတွင် ဗီယန်ကျင်း လေဆိပ်သို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစု၏ လူယုံတော် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးတေဇပိုင် အဲယားပုဂံ လေယာဉ် ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး ခရီးသည် ၈ ဦး ပါရှိသည်ဟု သိရသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက် တခုက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ဇနီးနှင့် မိသားစုဝင် အရင်းအချာများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုသည် အလည်အပတ် သဘောမျိုး သွားရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/28/2007 09:27:00 AM0comments
Q: What touched off the current demonstrations in Myanmar?
A: The trigger was the military regime's huge hike of fuel prices, which caused the cost of public transport — used by most people in Myanmar — to also rise. But the protests also reflect long-standing discontent with the repressive military regime, and were initiated by veteran pro-democracy activists.
Q: What do the demonstrators want?
A: The original demands were for the fuel price to be dropped again and other measures to ease people's economic burdens in one of Asia's poorest nations. But they also include apologies for mistreating monks duringademonstration. More importantly, they have broadened to include the release of all political prisoners including opposition leader Aung San Suu Kyi. There is no official leadership of the protest movement, however, so the demands are not universally recognized.
Q: Why are monks involved and what role do they play in society?
A: Buddhist monks have traditionally spearheaded movements for social and political change, against British colonialism as well as post-independence military dictatorships. They were very active inafailed 1988 pro-democracy uprising, as well as 1990 protests that were put down over several months with raids on hundreds of pagodas and the arrests of hundreds of monks. Monks are revered by the majority of the nation's predominantly Buddhist population as the conscience of society.
Q: Will the military government pay heed to international pressure? Who has leverage on the junta and why?
A: Myanmar's government so far has been able to shrug off harsh criticism and economic and political sanctions applied by the U.S. and other Western nations. It has survived by cultivating investment in its potentially vast oil and gas reserves. Neighboring China and India curry favor with the junta because of Myanmar's strategic location and resources. China is the regime's main ally, supplying the most aid and diplomatic muscle at international forums.
Q: The U.S. government announced sanctions on Myanmar; will they have an impact? What is the history of the U.S. in Myanmar?
A: As long as the military government can turn to other sources for support, any sanctions are likely to be ineffective. Some analysts argue that by so completely ostracizing the regime, Washington loses any chance at influencing it or elements in the military to make reforms. To Americans, the country is best know for its role asaWorld War II theater that wasaback road into China, with troops fighting in the jungle and pilots flying supply missions over the nearby Himalayas. Its most famous citizens are Suu Kyi, the 1990 Nobel peace laureate, and the late U Thant, who served as U.N. secretary general
Q: What does Myanmar have that the world wants?
A: Myanmar's location on the Indian Ocean makes itadesirable outlet to the sea for its northern neighbor China. That fact makes it important for China's regional rival, India. The country is rich in natural resources, with offshore natural gas topping the list. But it also has valuable mineral deposits and is one of the world's biggest suppliers on gem stones. It is alsoasource of illicit drugs, being the world's second-biggest producer of opium and its derivative, heroin, as well asamajor exporter of methamphetamine. The government claims to be trying to suppress the drug trade,
Posted by Mr. Programmer at 9/28/2007 07:26:00 AM0comments
US: Myanmar must end violence against demonstrators
The United States demanded Thursday that Myanmar's military rulers end an "outrageous" and deadly crackdown on anti-government protestors and called for more global pressure on the junta.
"The Burmese government should not stand in the way of its people's desire for freedom. They must stop this violence against peaceful protesters now," said White House national security spokesman Gordon Johndroe.
US President George W. Bush was expected to issueastatement later calling for increased global pressure on Myanmar, while the US Treasury Department was due to releasealist of individuals there targeted by new US sanctions.
But US officials declined to criticize China and India, Myanmar's giant neighbors, over braking diplomatic efforts to bring about change there.
"I think it's clear that the president wants increased international pressure on Burma," spokesman Tony Fratto said, pointing to Bush's warnings to the junta in his speech this week to the UN General Assembly.
"I also expect the Treasury dept soon to move on their role in imposing some sanctions with respect to Burma," he said, referring to travel restrictions and financial sanctions that Bush announced in New York.
"We must see continued stepped up international pressure on Burma," said Fratto, who called the crackdown on anti-government protests there "an outrageous situation."
"The world is watching, we also need the world acting and that's why we're going to continue to work with our partners in the international community and the other countries on the UN Security Council to continue work to step up pressure on Burma until they change their practices," he said.
Fratto also declared that the United States would continue to call the country "Burma" inashow of support for pro-democracy activists there.
"We choose not to use the language ofatotalitarian dictatorial regime that oppresses its people," he said. "And we have freedom of speech here, maybe they don't."
His comments were in line with the US State Department and the Central Intelligence Agency, which pointedly note that the 1989 name change never won approval from the country's legislators.
"The democratically elected but never convened parliament of 1990 does not recognize the name change, and the democratic opposition continues to use the name 'Burma.' Due to consistent support for the democratically elected leaders, the US government likewise uses 'Burma,'" the State Department website says.
The CIA "World Fact Book" notes that the new name isaderivative of the Burmese short-form name Myanma Naingngandaw.
Earlier, security forces in the country formerly known as Burma swept through the heart of the capital city Yangon, arresting hundreds of people and firing warning shots as they intensifiedaviolent crackdown on anti-government demonstrators.
At least 50,000 people, many of them youths and students, swarmed into Yangon undeterred by the deaths of at least four protesters, including three Buddhist monks, the day before, repeatedly defying orders to disperse.
Reports were sketchy afterachaotic six hours of protests, but witnesses and diplomats said at least four people were shot, includingaJapanese video journalist who was killed.
It was the 10th straight day that large protests have erupted against the ruling junta, which caused outrage in this impoverished Southeast Asian nation by doubling fuel prices on August 15.
Posted by Mr. Programmer at 9/27/2007 11:57:00 PM0comments
မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့သံဃာတော် တွေကို တပ်မ(၃၃) လက်အောက်ခံ တပ်သားများက ထိုင်ကန်တော့ တောင်းပန်တယ်လို့ မြို့ခံများကပြောပါသည်။
သာသနာ့တက္ကသိုလ်အပါအ၀င် မြို့ပေါ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေက သံဃာတော်တွေ ကြွချီဆန္ဒပြပြီး (၄၂)လမ်းအရောက်မှာ ဆက်လက်မချီတက်ဖို့ ၄င်းတို့တပ်တွေက မေတ္တာရပ်ခံတားမြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော် သံဃာတော်တွေက ` ပစ်ချင်ရင်ပစ်၊ ဆက်လက်ချီတက်မယ်` လို့တုံ့ပြန်ပါသည်။
နောက်ဆုံးမှာ တပ်သားတွေက လက်နက်တွေကိုလမ်းပေါ်ချ၊ သံဃာတော်တွေကို ထိုင်ကန်တော့ပြီး ဆက်လက်မချီတက်ဖို့ ငိုယိုတောင်းပန်တယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ မြို့ခံတစ်ဦးကပြောပြသည်။
ဒီမြင်ကွင်းကို ဘေးကကြည့်နေတဲ့ပြည်သူ တွေက ၀ိုင်းဝန်းလက်ခုပ်တီးအားပေးကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ သံဃာတော်တွေကို တပ်မ(၃၃) ကလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါသည်။
သြော် ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီလိုဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
Posted by Mr. Programmer at 9/27/2007 11:54:00 PM0comments
After refusing to condemn Myanmar at the United Nations, China on Thursday issued an evenhanded plea for calm in the country, calling on all sides to show restraint.
The United States, Australia and other countries reiterated their calls for the junta to openadialogue with peaceful protesters after soldiers opened fired intoacrowd to try to disperse tens of thousands of people who defied the government's ban on demonstrations.
Japan, meanwhile, said it would protest the death of one of its citizens in the violent crackdown.
China has come under increasing pressure to use its regional influence to urge Myanmar's ruling junta to show restraint in dealing with the protests.
On Wednesday, China refused to condemn Myanmar and ruled out imposing sanctions against the country, but for the first time agreed toaSecurity Council statement expressing concern at the violent crackdown and urging the country's military rulers to allow inaU.N. envoy.
China and Russia contend that the situation in Myanmar is an internal affair and doesn't threaten international peace and security — as required for Security Council action — so getting them to agree to the press statement was consideredapositive step.
China's U.N. Ambassador Wang Guangya said after the meeting that the most important thing is to see that the Myanmar authorities "restore stability." But he said he believed sanctions would not be helpful, adding "these problems now at this stage (do) not constituteathreat to international and regional peace and stability."
Chinese Foreign Ministry spokeswoman Jiang Yu said atamedia briefing in Beijing on Thursday that "China hopes that all parties in Myanmar exercise restraint and properly handle the current issue so as to ensure the situation there does not escalate and get complicated."
The crackdown puts China inabind. Its communist government has developed close diplomatic ties with junta leaders and isamajor investor in Myanmar. But with the Beijing Olympics less thanayear away, China is eager to fend off criticism that it shelters unpopular or abusive regimes.
In Japan, Chief Cabinet Secretary Nobutaka Machimura said Tokyo will lodgeaprotest against Myanmar's military junta over the death of Kenji Nagai, 50,ajournalist who was covering the protests in Yangon for Japanese video news agency APF News.
He was confirmed dead after his father andacompany representative identified him inaphoto,aJapanese Embassy official in Myanmar told The Associated Press.
"We strongly protest the Myanmar government and demand an investigation (into the death). We demand (Myanmar) take appropriate steps to ensure the safety of the Japanese citizens in that country," Machimura was quoted by the Kyodo News Agency as saying.
In Beijing, U.S. Assistant Secretary of State Christopher Hill told reporters that the use of force by the junta "will solve nothing."
"It seems that people are sendingavery clear message to the regime there that they need to beginaprocess of genuine dialogue and above all refrain from any use of force," Hill said.
"We all need to agree on the fact that the Burmese government has got to stop thinking that this can be solved by police and military, and start thinking about the need for genuine reconciliation with the broad spectrum of political activists in the country," he added.
Hill was expected to discuss the violence in Myanmar with Chinese officials on the sidelines of North Korean nuclear disarmament talks this week in Beijing. He declined to say whether Washington would request specific measures from Beijing.
"I think it's something that all countries need to be concerned about especially to use the influence that countries have to prevent the Burmese authorities from cracking down on these peaceful protests," Hill said.
First lady Laura Bush pleaded Wednesday with Myanmar's ruling military regime to resist using force, but her personal appeal came the same day that security officers opened fire on demonstrators.
"I want to say to the armed guards and to the soldiers: Don't fire on your people. Don't fire on your neighbors," she said inaVoice of America interview held in New York, where President Bush had been attending meetings at the United Nations.
Australian Prime Minister John Howard said his government would also press Beijing to urge the junta to end its violent repression.
"We will be encouraging ... China to exertapositive influence on the regime to encourage it to hold back on the repression and to adoptamore accommodating attitude toward the people," Howard told Australian Broadcasting Corp. radio.
The European Union has already joined the United States in condemning the attacks and urging the country's military rulers to stop the violence and openadialogue with pro-democracy leaders.
On Thursday, EU diplomats agreed to consider adding to sanctions already in place against the country in response to its lack of political reforms and poor human rights record.
"The crucial point is how to take measures that can have an impact on those who are responsible for events in the country without harming the population," EU spokesman Amadeu Altafaj Tardio said in Brussels, Belgium.
Posted by Mr. Programmer at 9/27/2007 11:39:00 PM0comments
တစ်ရက်ငါးနာရီအောက် အိပ်စက်သူတွေ နှလုံးရောဂါနဲ့သေဆုံးနိုင်မှု နှစ်ဆပိုများ
လုံလောက်သော အိပ်စက်မှုမရခဲ့သောသူများသည် နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးနိုင်ဖွယ်ရှိမှု နှစ်ဆပို၍ရှိနေကြောင်း တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဗြိတိသျှလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မသိရသေးသော်လည်း အိပ်ရေးမ၀ခြင်းသည် နှလုံးကို တိုက်ခိုက်မှုနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သွေးဖိအားတိုးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း သုတေသီများက ပြောသည်။
အစိုးရ၀န်ထမ်း ၁၀၀၀၀ ကို ၁၇ နှစ်ကြာလေ့လာချက်အရ တစ်ညတွင် ၇ နာရီအိပ်ချိ်န်ကိုလျော့၍ ၅ နာရီနှင့်အောက် အိပ်စက်ခဲ့ကြသူများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးရမှုအန္တရာယ်မှာ ၁၇ ဆမြင့်လာသည်ဟုဆိုသည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ သေဆုံးရမှုမှာလည်း နှစ်ဆကျော်သည်။ တွေ့ရှိချက်က ခေတ်သစ်အလုပ်များနေကြသော လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို မီးမောင်းထိုးပြနေကြောင်း warwick ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဖရန်စက်ကို ကက်ပူစီယိုက ကင်းဘရစ်ဗြိတိသျှအိပ်စက်မှု အသင်းကြီးကွန်ဖရင့်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်တွင် လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်္ဂလန်တွင် သုံးပုံတစ်ပုံတိုို့မှာ အများအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ငါးနာရီခန့်သာ အိပ်စက်နေကြသည်။
လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းက အိပ်ချိန်ကိုလျှော့ရန်ဖိအားပေးနေမှုသည် အထူးသဖြင့် ၅ နာရီအောက် အိပ်စက်ခဲ့လျှင် မကောင်းသော အယူအဆတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။ ကက်ပူစီယိုနှင့်အဖွဲ့၏ လေ့လာမှု၌ အသက် ၃၅ နှင့် ၅၅ ကြားရှိ လူများ၏ ၎င်းတို့ဘ၀တွင် ၁၉၈၅-၈၈နှင့် ၁၉၉၂-၉၃ တို့၌ အိပ်စက်သည့်ပုံစံများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ အသေအပျောက်ကို ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် လေ့လာခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များကို အခြားသောအန္တရာယ်အကြောင်းအချက်များဖြစ်သည့် အသက်အရွယ်၊လိင်၊ဆေးလိပ်နှင့် အရက်သေစာသောက်သုံးမှု၊ ခန္ဓာကိုယ်အညွှန်းကိန်း၊သွေးတိုးနှင့် ကိုလက်စထရော စသည်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းချိန်ထိုးခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်ကထက် ၁၉၉၀ တွင် အိပ်ချိန်ပို၍လျော့လာသူများသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာသိခဲ့ရသည်။
ထို့အတူပင် တစ်ရက်လျှင်အိပ်ချိန် ၉ နာရီထက်ကျော်၍ အိပ်စက်သူများမှာလည်း အသေအပျောက်နှုန်း ပို၍မြင့်မားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဤနေရာ၌ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့် မဆက်နွယ်တော့ဘဲ အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်သည့် စိတ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် ကင်ဆာနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဒဏ်ဖြစ်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်နေကြောင်း ကက်ပူစီယိုကပြောသည်။
တစ်ရက်လျှင် ၇နာရီအိပ်စက်မှုသာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကတင်ပြသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/26/2007 10:41:00 AM0comments
သံဃာတော်များ ကို ရိုက်နှုက်ခြင်းသည် သာသနာပြုရာရောက်၏ တဲ့. ထူးဆန်းပါပေ့..ကိုမြင့်မောင်ရယ်။
ကျနော်နားလည် ထားသော၊ ကျနော် အဖိုးအဖွား၊ အဖေအမေနားလည်ထားသော သံဃာမှာ ဘုရားသားတော်များ ဖြစ်သည့် အလျှောက် အမြင့်မြတ်ဆုံးထဲမှာ ပါဝင်သည့် ရတနာ သုံးပါးထဲမှ တစ်ပါးအပါ အ၀င်ဖြစ်သည်။ ဒါမေမယ့် ဒီနေ့သတင်းစာဖတ်လိုက်ရာ အံ့လည်းအံ့သြ.ကြားလည်း မကြားဘူး ဘဲ ထူးဆန်းစွာဖြင့် မိမိအာဏာတည်မြဲရေ အတွက် သာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးမြင့်မောင်က သံဃာတော်ကို ရိုက်နှက်ခြင်းသည် သာသနာပြုရာရောက်သည် လို့ ပြောဆိုသည် ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ပြောလိုက်တော့ဖြင့် သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး၊ သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေးဖြင့် နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေသော အစိုးရက မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော အမှားကို မတောင်းပန်မဲ့အပြင် သံဃာတော်များကို တောင်ထပ်မံ ရိုက်နှက်မည့် သဘော ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့ စာမတတ်မှန်း သေချာသည်။ ဒီလောက်များပြား လှသည့် ကံဆောင်နေသည့် သံဃာအရေအတွက် ကို တစ်ပြည်လုံးရှိ သံဃာအရေအတွက်၏ ၂% လို့ဆိုပြန်သည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/25/2007 10:10:00 AM0comments
Some 100,000 anti-government protesters led byaphalanx of Buddhist monks marched Monday through Yangon, the largest crowd to demonstrate in Myanmar's biggest city sincea1988 pro-democracy uprising that was brutally crushed by the military.
Myanmar civilians and Buddhist monks gather before the march at the front gate of Shwedagon pagoda, Yangon.
1 of5As the march headed toward the Defense Ministry's offices alongastraight stretch of road, the back of the crowd could not be seen from the front. Monks and activists estimated the turnout was about 100,000, though an exact count was difficult.
The march, launched from the Shwedagon pagoda, the country's most sacred shrine, gathered participants as it winded its way through Yangon's streets. Some 20,000 monks took the lead, with onlookers joining in on what had been billed asaday of general protest.
The march covered at least5miles in its first few hours, passing by the old campus of Rangoon University,ahotbed of protest in past times. Students were seen joining Monday's march.
On Sunday, whenasmall crowd of about 400 people split off and headed for the house of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, security forces deployed in force to block them.
On Saturday, more than 500 monks and sympathizers were allowed past barricades to walk to the house where Suu Kyi is detained. The Nobel Peace laureate greeted them from her gate in her first public appearance in more than four years --ameeting that symbolically linked the current protests to her struggle for democracy.
"The protests will continue to grow as more people gain the courage to join, but they have not yet reached the point where I will allow my family to march," saida50-year-old taxi driver who would not give his name. "There is still too much uncertainty to do that."
The latest protests began on August 19 asamovement against economic hardship, after the government sharply raised fuel prices, increasing the overall cost of living. Arrests and intimidation saw the movement begin to falter until last week, when monks -- who have long served as the country's conscience -- became the protests' vanguard.
Posted by Mr. Programmer at 9/24/2007 07:14:00 PM0comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓကိုစော်ကားခြင်း။
ယခုတလော ကြားရသည့် သတင်းများမှာ နားမ၀င်စရာ.. မထင်မှတ်စရာ မယုံချင်စရာများ..။
ဓာတ်ဆီဈေးများ တက်သွားခြင်း၊ မိမိနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဈေးများ အဆမတန် တက်သွားခြင်း၊ ၄င်းအပေါ်မူတည်၍ ကားခများ တက်သွားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းဈေးများ တက်သွားခြင်း၊ အရာရာတက်သွားသော ဈေးနှုန်းများ နည်းတူ အများပြည်သူ စိတ်ဓာတ်များ ကျဆင်းသွားခြင်း၊ ကျဆင်းသွားသည် နည်းတူ မကျေနပ်ချက် များပေါ်လာ၍ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခက်အခဲများ ကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ၄င်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖော်ထုတ်မှုကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခြင်း၊ ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်သည် ကိုမကြည့်နိုင် ၍ ဘုရားသားတော်များ ဖြစ်သည့် သံဃာများ မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့သခြင်း၊ ၄င်းမေတ္တာပို့သသူ ဘုရားသားတော်များ ကိုပင် ထပ်မံ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း အစုံအလင်ပင်..။
ယနေ့ခေတ်အခါတွင် နိုင်ငံတကာ၌ လောင်စာဆီရှားပါး မှု အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ သည်။ အိုပတ်အဖွဲ့ဝင် ရေနံ ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံများမှ လက်ရှိထုတ်လုပ်လျှက် ရှိသော ပမာဏထက် လျှော့ချ၍ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ လည်း အဲ့ဒီ ရေနံဈေးတက်သည့် အချက်များထဲမှ တစ်ချက်ဖြစ်သည် ကို ဖတ်ရှုနားလည်ခဲ့ပါသည်။ ကျနော် နေထိုင်ရာ မည်သည့် သံယံဇာတမှ မထွက်သည့် နိုင်ငံ၌လည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့တက်နေသည်။ ဒါပေမယ့် တက်သွားသည် မှ မပြောသလောက်ပင်။ အနည်းအကျဉ်းသာတက်၍ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုးတက်လာသည့် နိုင်ငံသားတို့၏ တစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေကလည်း မြင့်တက်လာ၍ အကြောင်းမဟုတ်။ သုံးနိုင်စွဲနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကို လူဖြစ်အောင်မွေးဖွားခဲ့သော သဘာဝသံယံဇာတ များ ချမ်းသာကြွယ်ဝလှသည့် နိုင်ငံကတော့ မကြားဘူးအောင်ကို အရမ်းတက် ပြစ်လိုက်သည်။ အိုပက် အခက် နယက အချက် လားပင်မသိ။ ဒါ့အပြင် မိမိနိုင်ငံမှ ပင် ထွက်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဈေးကလည်း ၅ဆ ၆ဆ တက်သွားသည်။ ဓတ်ဆီတက်သည် ကို အကြောင်းပြချက် ပေးရန်ရှိသော်လည်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဈေးတက်သည် ကိုတော့ မည်သို့ပေးသည်မသိ။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ အစိုးရမှ မရှင်းလင်း၊ ဓာတ်ဆီဈေးသာ ရှင်းလင်းသည်။ အဲ့ဒီ ဓာတ်ဆီဈေးရှင်းလင်းသည် ကိုလည်း နားမလည်နိုင်။ အကြောင်းမှာ မိမိနိုင်ငံမှ သွင်းကုန်တန်ဖိုးကိုဖြတ်လျှင် တစ်ဒေါ်လာ ၆.၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့်တွက်ပြီး ဒီဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းကို မူ တရားမ၀င်ဈေးကွက်မှ ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြတ်သည်။ သြော် တော်လိုက်တာ ဟု ပါးစပ်မှ ရေရွတ်မိသည်။
ပြီးတော့ ပြောလိုက်သေးသည်.. ဒီလောက်ကြာအောင် သူတို့စိုက်ထုတ်ပေးထားတာ အတော်ကြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာ ဖြင့်ပြောလိုက်သေးသည်။ အဲ့ဒီ လိုစိုက်မပေးချင်းရင် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ရှိသော သဘာဝတွင်းထွက်များမှ ရရှိသော ဒေါ်လာများ မည်သည့်အတွက် သုံးမည်နည်း။ ပြန်မဖြေသော်လည်း အဖြေကရှိနေနှင့်သည်။ စစ်တပ်အတွက် သုံးရန်အတွက်ပင်။ နိုင်ငံစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းဖြစ်နေချိန် တွင် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဒီလောက် အသုံးချသည်ကို အံ့လည်း အံ့သြမိသည်။ ဥပမာတစ်ခုဆိုပါစို့..။ ဆင်းရဲသား မိသားစုတစ်စု သည် စားစရာမရှိ နေစရာအဖြစ် တဲစုတ်လေးတစ်ခုရှိပါသည်။ တစ်နေ့စားစရိတ်ကိုရရန် ပင်မလွယ်..။ ထိုမိသားစု ကို တတ်နိုင်သည် လူတန်းစားမှ ငွေ ၁၀၀၀ ပေးလိုက်သည်။ အဲ့ဒီငွေကို မည်သည့်အတွက် အသုံးချမည်နည်း။ တနေ့သာ စာစရိတ်အတွက် အသုံးချမည်လား.. မိမိတဲစုတ်လေး လုံခြုံရေး အတွက်အသုံးချမည်လား၊
ခင်များတို့ ကအဲ့ဒီမိသားစု လေးကိုယ်စား ဖြေကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီငွေကို တက်နိုင်သည့် မိသားစု လေးကိုပေးကြည့်ပါ။ သူ့အိမ်အတွက်လိုအပ်ချက် အတွက် အသုံးချမည်ပင်။ ဒီအတိုင်ပင်..
မပြည့်မစုံ ဆင်းရဲမွမ်းတေနေ သော ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ရေးသည် အဓိက ကဏ္ဍမှ မပါနိုင်သေး။ တိုင်းပြည် လူထု စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှုကို အရင်ဖြေရှင်းသင့်သည်။
ထို့အပြင် လက်ရှိလူလောကရှိ အရာပစ္စည်းတော်တော်များသည် လောင်စာစွမ်းအား ကိုအားကိုး၍ ထုတ်လုပ်နေရသည်။ လောင်စာစွမ်းအားဈေး တက်သွား၍ ကုန်ပစ္စည်းများ အားလုံး ဈေးတက်သွားသည်။ အဲ့ဒီတက်သွားသည် အတွက် အခြေခံလူတန်းစား အဖို့ အခက်အခဲဖြစ်သွားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်တက်သွားသည်။ ရုံးသွား ရုံးပြန်များ ဒုက္ခရောက်သွားသည်။ ဒါကိုပင် လက်ရှိတာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်နေသူတို့ ကပြောလိုက်သေးသည်။ ဆန္ဒပြရန် မလို၊ ဆန္ဒပြုရန်သာ လိုသည်တဲ့။ ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောလိုက်ရရင်.. သောက်ရှက်ကော ရှိသေးရဲ့လားလို့.။ မတက်နိုင်တဲ့ အဆုံးပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြကြသည်။ ထုံစံအတိုင်းပင် အကြမ်းဖက်၍ နှိမ်နှင်းပြန်သည်။ ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်သမားများ ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်၍ ဖမ်းဆီးပြန်သည်။ မျက်စိမှိတ်၍ အော်နေသည်။
နောက်ဆုံးမတတ်နိုင်သည့် အဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ရတနာသုံးပါးဝင် ရဟန်သံဃာများ က ပြည်သူများဒုက္ခရောက်သည့် အတွက် သူတို့ ကပြည်သူများ ဒီဒုက္ခဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းရန် အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်မေတ္တာပို့သည်။ ထိုသည်ကိုပင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများ စုနေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံ မှ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေသော သူများ က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အထွတ်အထိပ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ဘုရားသားတော် သံဃာများ
ကိုရိုက်နှက်နှိမ်နှင်းသည်။ ယခုလ ၅ ရက်နေ့ ပခုက္ကူမြို့တွင် သံဃာတော် အပါး ၅၀၀ ကျော် စီတန်းလှည့်လည်ကြွချီပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သသည်ကို အာဏာပိုင်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ဖောက်တားဆီးပြီး အကြမ်းဖက်သည့်နည်းဖြင့် သံဃာတော် များကို ကြိုးကွင်းဖြင့် ပစ်ဖမ်းမှု၊ ဓာတ်တိုင်တွင် တုပ်နှောင်၍ ရိုက်နှက်မှု၊ သင်္ကန်းအတင်းချွတ်ပြီး ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကံအကျိူးကို ပေးဆပ်ရမည်ဟု သံဃာတော်တပါးက မိန့်သည်။ ကြားကြားချင်. မယုံချင်..။ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့။ အံ့လည်း အံ့သြမိသည်။ ရွံလည်းရွံသွားမိသည်။ ကျနော်အလုပ်မှ နိုင်ငံခြားသားများပင် လာ၍မေးမြန်းကြသည်။ အလွန်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော နိုင်ငံမှဟု ပြောလေ့ရှိသော ကျနော့်အတွက် ၄င်းတို့၏အမေးများ အတွက် အဖြေတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။
သံဃာတော်များမှ သူတို့အား စော်ကားမှုကို အစိုးရမှ ၀န်ချတောင်းပန်ရန် တောင်းဆိုလေသည်။ သို့သော်. ဘာသာတရားမရှိသော အစိုးရက မလှုပ်ချေ။ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသည်။ ဤအခါတွင် သံဃာများ မှ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ်မှောက်ကြတော့သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း သပိတ်မှောက်ကြသည်။ ဒါတောင် မန္တလေးမှ တာဝန်ရှိသူများက သံဃာများကို မည်သို့ စည်းရုံသည် ထင်သနည်း။ ဘုန်းဘုန်း တို့ ဆန္ဒမပြရင် လက်ကိုင်ဖုန်းပေးမည်ဟု၍ပင်။ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့သေးလားပေါ့။ အံ့လည်း အံ့သြမိသည်။ ဒါ့အပြင် ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း နှင့် အလုံမှ ဆွမ်းချက်ရုံများကို လည်း ဆွမ်းမလောင်းရဟု အမိန့်ထုတ်သည်။ ရက်စက်လိုက်ကြတာ။ ငါ့မကောင်းပြော ငါ့ရန်သူ ဟုပင်။ ၉ နှစ်သား ကလေးမှ အုပ်ချုပ်သော အစိုးရလား ထင်မှတ်ရသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/22/2007 10:02:00 PM0comments
Today’s healthcare industry moves faster than ever. Many healthcare providers face the challenge of providing the best clinical care inacomplex and costly environment. Information management can playavaluable role in facing these challenges, but after years of cost increases and budget cutbacks, combined with mergers and ongoing staff shortages, healthcare providers can find that information management gets in the way of patient care. Health Level7(HL7) is an industry-standard application protocol for electronic data exchange of information. BizTalk Accelerator for HL7 extends the capabilities of BizTalk Server R2 for healthcare providers by deliveringacomprehensive HL7 messaging solution that enables sharing of patient information within and between healthcare organizations.
BizTalk Accelerator for HL7 delivers enhanced messaging capabilities, specific HL7 standard formats and schemas and middleware integration tools. Highlights include:
• Complete set of schemas for all HL7 v2.x message types and trigger events
• Flexible and configurable adapter for HL7's Minimal Lower Layer Protocol (MLLP)
• Ability to configure the level of message validation
• Automated and configurable support for standard HL7 message acknowledgment modes including original and enhanced acknowledgments
• Ability to process HL7 batch message protocols as well as createabatch from individual messages or splitabatch into individual messages
• Configurable auditing component that allows an organization to log access to confidential patient information contained within HL7 messages
What’s New in BizTalk Accelerator for HL7 2.0
BizTalk Accelerator for HL7 2.0 includes the following:
• Support for HL7 v2.5
• Support for ordered messaging:achange was made to the MLLP adapter to leverage the support of the ordered messaging capability in BizTalk Server R2
• Support of international characters
• Enhanced socket management for MLLP: resolves connectivity issues with other rogue interface engines that haveasub-optimal TCP/IP socket implementation
• Schema generation tool to facilitate creation of customized libraries of HL7 v2 message models and generation of BizTalk Transaction Set schemas
• Fixes to the Mapper in Biztalk Server 2006 R2 to address the “segment scrambling” problem when mapping HL7 v2 messages
Posted by Mr. Programmer at 9/22/2007 09:50:00 PM0comments
HIV ဝေဒနာသည်များ အသက်ပိုကြာရှည်နေနိုင်မည့် AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖိုင်ဇာဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္မဏီကြီးက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပသော ချီကာဂိုဆေးဖက်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်တွင် ဖိုင်ဇာဆေးကုမ္မဏီကြီးက ၁၀နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး HIV ရောဂါအတွက် သောက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သော Selzentry နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဖေါ်တင်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆေးကို ၄၈ ပတ်ကြာ လူနာများနှင့် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ သာမန်ကုသမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက HIV ရောဂါပိုးများကို သုံးဆပို၍ ကာကွယ်တားဆီးထားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
အမေရိကန်အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ FDA က ၎င်းSelzentry ကို ဩဂုတ်လက အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
၎င်းဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ T-Cell များတွင်းသို့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်များ မ၀င်ရောက်အောင် တားဆီးပေးနိုင်ကြောင်း ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် Quest Clinical Research မှ ဒါရိုက်တာ ဂျက်ကော့လေဇာနီက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ၎င်းဆေးသည် HIV ရောဂါပိုးကို ပျောက်ကင်းအောင် သို့မဟုတ် အခြားလူတစ်ဦးကို မကူးစက်အောင် ကုသမပေးနိုင်ကြောင်း ကုမ္မဏီကပြောသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာလည်း အခြား HIV ဆေးများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းဆေးဝါးရောင်းချမှုမှသည် ဖိုင်ဇာကုမ္မဏီအနေနှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အရောက်တွင် နှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ရရှိစေနိုင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားသည်။ ကုမ္မဏီက ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချီရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားသည်။
Source : Phatpa
Posted by Mr. Programmer at 9/21/2007 11:44:00 AM0comments
Posted by Mr. Programmer at 9/17/2007 09:38:00 PM 1 comments
မိုက်ကရိုဝှေ့နဲ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အငွေ့ အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်
စက်ရုံ အလုပ်သမားသာမဟုတ် စားသုံးသများသည် မိုက်ကရိုဝှေ့မီးဖိုတွင် ပြုလုပ်သော ထောပတ် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် မှထွက်သောအငွေ့များကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစနိုင်ကြောင်း အဆုတ်ရောဂါ သုတေသနပြုနေသည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးက ဖက်ဒရက် ဥပဒေသမားများထံသတိပေးသည့် စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်။
ဒင်ဗာ-ဂျူးအမျိုးသား ဆေးဖက်နှင့် သုတေသနစင်တာမှ အဆုတ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ရေးသားဖော်ပြရာ၌ ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်အနေနှင့် စားသုံးသူအမျိုးသားတစ်ဦးမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေ့စဉ်နှင့် အမျှဆိုသလို မိုက်ကရိုဝေ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်မှ အငွေ့များရှူရှိုက်ခဲ့ မှုကြောင်း အဆုတ်ရောဂါ ခံစားနေရသည်ကို တွေ့ ရသည်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အစားအသောက်စက်ရုံများ၌ ဓာတုအနံ့ရတာများကြောင့် ဝေဒနာခံစားရသော၊ ရာပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားများ၏ တရားစွဲဆိုမှုများရှိခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။
ယခုတွေ့ရှိချက်ကိုတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် Flavor နှင့် Extract ထုတ်လုပ်သူများအစည်းအရုံးက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာ၌ ၎င်းအသင်းဝင်များကို ထောပတ်အနံ့ထည့်ရာတွင် အသုံးပြုသော Diacetyl အရေအတွက်လျော့ထည့်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ Diacetyl ဒိုင်ရာစီတိုင်းကို FDA ကအနံ့ထည့်ရာတွင် သုံးနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပေးထားသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/08/2007 11:09:00 PM0comments
လူသားနဲ့ တိရိစ္ဆာန်မျိုးစပ် သန္ဓေသားလောင်း သုတေသန လုပ်ခွင့်ပြု
လူသားနှင့် တိရိစ္ဆာန်သန္ဓေသားဖန်တီးတည်ထွင်ခွင့် သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန်ကိစ္စကို ခွင့်ပြုရန်အတွက်စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မူအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ၎င်းမျိုးစပ်များကို အသုံးပြုလိုကြသော သိပ္ပံပညာရှင်များအနေနှင့် တစ်ဦးချင်းသီးခြားစီ လျောက်လွှာတင်ကြရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း Human Fertilisation and Embryology Aythority HFEA အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသုတေသနပြုလုပ်မှုမှာလည်း အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကဲ့သို့အခြေအနေများ အတွက်ကုထုံးများ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့မှုကြောင့် အများပြည်သူများက ငြိမ်နေကြကြောင်း HFEA ဆွေးနွေးချက်အရသိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ သတင်းကြောင်း လူတော်တော်များများ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြကြောင်း အဆိုပါမျိုးစပ်စမ်းသပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သူများကပြောသည်။ စတင်းဆဲလ် Stem Cell ထုတ်ယူရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်အနေနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လူသား၏ဆဲလ်များနှင့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးဥများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် မျိုးစပ်သန္ဓေသားဖန်တီးရန် လိုလားနေကြသည်။
ထိုသို့ဖန်တီးပြီးပါက ၎င်းသန္ဓေသားကို ၁၄ ရက်အတွင်း ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ ကလပ်စည်း(ဆဲလ်)များသည် ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ရေး အခြေခံကိုဖွဲ့စည်းပေးထားသည်။ ၎င်းမှ တစ်သျူးများဖြစ်လာရန် အလားအလာရှိသည်။
လောလောဆယ်တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မျိုးပွားကုသမှုမှ ကြွင်းကျန်ရစ်သော လူသားမျိုးဥများအပေါ် မှီခိုအားထားရသည်။
လန်ဒန် Kings ကောလိပ်နှင့် Newcastle တက္ကသိုလ်တို့မှ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က HFEA အဖွဲ့သို့ မျိုးစပ်သန္ဓေလောင်းအသုံးပြုရန် လျှောက်ထားကြသည်။
၎င်းလျောက်လွှာနှစ်ခုကိုလာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် သီးခြားစီစစ်ရေးကြားနာမှုများပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုသည်။ HFEA ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အစိုးရက ၎င်းသုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ချမှတ်ရန် ပြုလုပ်နေစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သန္ဓေသားသုတေသနနှင့် ပတ်သက်သည့်ဥပဒေများ ခေတ်မမီတော့ရုံမက ယခုပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားခြင်းလည်းမရှိချေ။ မူလက အစိုးရသည် စက္ကူဖြူစာတန်းဖြင့် ယခုသုတေသနလုပ်ငန်းကို ပိတ်ပင်တားဆီးရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောက်ပြင်ခဲ့သည့်ဝန်ကြီးများကို လူသားမျိုးစပ်သန္ဓေလောင်းသည် ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း လူသားမျိုးစေ့ပါပြီး တိရိစ္ဆာန်မျိုးစေ့ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်း သာပါကြောင်း အသိပေး၍ ပြောင်းလဲခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကို ပါလီမန်က အတည်မပြုမီကပင် HFEA အဖွဲ့က၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ Linacre Center of Healthcare Ethics မှ ဒေါက်တာ ဟက်လမ်ဝပ်ကမူ ယခုစမ်းသပ်မှုသည် သန္ဓေသားလောင်း အခွင့်အရေးများကို နောက်ထပ် ချိုးဖောက်ခြင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်နေချိန်အတွင်း သန္ဓေသားလောင်းသည် ၎င်းဘဝရှင်သန်မှုကို ဆုံးရှုံးရုံတင်မက လူသားမိဘများ အခွင့်ရေးပါဆုံးရှုံးစေနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာဝပ်ကပြောသည်။
မျိုးစပ်သန္ဓေသားလောင်းကို အသုံးချခြင်းသည် မည်သည့်အခါမျှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း ၎င်းသည် လူသားနှင့် တိရိစ္ဆာန်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ စော်ကားခြင်းဖြစ်ကြောင်း Comment တာ Reproductive Ethics လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ ဂျို့ဖင်းကွင်တာဗေးလ်က ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/08/2007 11:07:00 PM0comments
အလွန်အမင်း ဝေးလံသည့် အာကာသအတွင်း တစ်နေရာတွင် ပြေးနေသော ကြယ်တစ်လုံးနောက်မှ မိုင်သန်းပေါင်း များစွာ ရှည်ထွက် နေသည့် အမြီးတန်းရှည်ကြီးကိုမြင်တွေ့ ရ၍ မိမိတို့ အံ့မခန်းဖြစ်ရသည်ဟုအမေရိကန် သိပ္ပံ ပညာရှင်များက သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
"မိုင်ရာ" ဟု အမည်ပေးထားသော ယင်းကြယ်ကို ယခင်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့်ကတည်းက နက္ခဗေဒပညာရှင်များ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြသည်။သို့သော် ကြယ်ကြီး၏ ခြေရာလမ်းကြောင်းကိုမူ မမြင်တွေ့ခဲ့ကြဘဲ နာဆာအဖွဲ့မှ ကြယ်စု သုတေသနဂြိုဟ်တု (GEE) လွှတ်တင် လိုက်သည့်အခါတွင်မှ မြင်တွေ့ခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။ အလျားအလင်းနှစ် ၁၃ နှစ်ရှိပြီး ကြယ်တံခွန်အမြီးနှင့် ဆင်တူ သော ယင်းမြီးတန်းရှည်သည် မိုင်ရာကြယ် မှ ဓာတ်ခိုးဓာတ်ငွေ့များကို မှုတ်ထုတ် လိုက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကြယ်မြီးတန်းရှည်မျိုးကိုလေ့လာ ခြင်းဖြင့် နေကဲ့သို့သော ကြယ်ကြီးများ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပျက်စီးကြပုံနှင့် Ýင်း ဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့် နေစကြ၀ဠာအသစ် များ စတင်ဖြစ်ထွန်းလာပုံတို့ကို သိရှိနိုင်မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များ တွက်ဆသည်။
]]ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိနေ တဲ့ကြယ်တစ်လုံးနောက်မှာ အင်မတန် ကြီးမားရှည်လျားတဲ့ အမြီးကြီးတန်းနေ တာကို လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့လိုက် ရတော့ ကျွန်တော်တို့ အလွန့်အလွန် အံ့သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်}}ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ ပါဆာဒီးနားမြို့ရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယားနည်းပညာတက္ကသိုလ် မှ ကြယ်စုသုတေသနဂြိုဟ်တုဆိုင်ရာ သုတေသီ ခရစ္စတိုဖာမာတင်ကပြောသည်။
ခရစ္စတိုဖာမာတင်က ယင်းကဲ့သို့သော ကြယ်မြီးတန်းရှည်ကြီးများ၏ ဖြစ်စဉ်သည် နေစကြ၀ဠာအသစ်များ စတင် ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေခံများပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကြယ်သစ်များ စတင်ဖြစ် တည် ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် လိုအပ် သည့်ကာဗွန်၊ အောက်ဆီဂျင်စသော ဓာတ်ငွေ့များကို မိုင်ရာ ကြယ်မြီးတန်း ရှည်လမ်းကြောထဲတွင် တွေ့နိုင် လိမ့်မည် ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/04/2007 10:53:00 PM0comments
ရန်ကုန်တွင်သရီးဂျီ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုခွင့်ရတော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သယ်ရေးစနစ် ပိုမိုအဆင့်မြင့်မားစေရန်အတွက် တတိယမိုဘိုင်းလ်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သောသရီးဂျီ WCDMA စနစ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အလုံးရေသုံးသောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် တပ်ဆင်ပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အသံနှင့်အတူရုပ်ပါမြင်နိုင်သည့် WCDMA ဖုန်းအလုံးရေသုံးသောင်းကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအသုတ်အဖြစ် လျက်မြန်စွာတပ်ဆင်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ယင်း WCDMA ဖုန်းများ ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် ရေဒီယိုစခန်း ၁၅ ခုကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းရေဒီယိုစခန်းများကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လျက်မြန်စွာ ပြီးစီးရန်အတွက် တည်ဆောက်ပေးနေပြီဖြစ်ရာ တည်ဆောက်ပြီးစီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် WCDMA ဖုန်းများကိုလည်း ပ်ြညသူများအား အသုံးပြုခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်တွင် လက်ရှိအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော WCDMA ဖုန်းကို ၂၀၀၈ နှစ်ထဲတွင် ပြည်သူများစတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်း WCDMA ဖုန်းကိုပြည်သူများ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိလျှင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်မှာ တိုးတက်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း WCDMA စနစ်သည် လက်ရှိဂျီအက်စ်အမ်ကွန်ရက်ကို အခြေပြုပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အတွက် ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒီ WCDMA သာမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟာ တော်တော်လေးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဒီ WCDMAက ကမ္ဘာမှာခေတ်အစားဆုံးဖြစ်သလို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေရဲ့ တတိယမျိုးဆက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြတဲ့ ဒီ WCDMA ဖုန်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အံ့မခန်းပါပဲ။
ဒီ WCDMA ကနေတစ်ဆင့် အဓိကတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြတာတွေကတော့ Multi-Media Massage တွေပို့ကြတယ်။
အင်တာနက်ကို ချိန်ဆက်ကြတယ်။ ဘောလုံးပွဲတွေကို ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ကြတယ်။ မိုဘိုင်းဘလော့ခ်တွေနဲ့ ချိန်ဆက်အသုံးပြုကြတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးရင် ချက်ချင်းအင်တာနက်ကို ဘလော့ခ်က တစ်ဆင့်တင်ပြီး အင်တာနက်ကကြည့်နိုင်ရုံသာမက တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင်ဒီ WCDMA က လမ်းညွန်မြေပုံစနစ်တွေတောင် ရှာလို့ရတယ်။
တခြားအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချကတွေလဲ များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီလိုအဆင့်မြင့်ဖုတ်းစနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခွင့်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်”ဟု မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချသူတစ်ဦးကပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ပြည်သူများဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို အဆင့်မြင့်စွာပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဆယ်လူလာမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ချပေးခဲ့ပြီး ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် တပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုတတိယမျိုးဆက်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်သော WCDMA ကိုလည်း ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ချပေးနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Posted by Mr. Programmer at 9/04/2007 10:37:00 PM0comments
Why do they focus only on protests despite there was issue for double taxation case?
Police have issuedastern warning against those who organise and participate in illegal assemblies.
This follows an assembly ofagroup of Myanmese nationals dressed in white at the Orchard MRT Station last Saturday (25 August).
They later headed for the City Hall MRT Station.
Police say the the intent of the assembly, which did not haveapolice permit, was to show support for fellow Myanmese who had been protesting back in Myanmar.
In the past few weeks, the capital of Yangon and other townships in in Myanmar have witnessedaseries of protests against fuel price hikes, leading to several arrests.
Investigations indicate the assembly in Singapore was organised through the short messaging service (SMS).
Twenty-three Myanmese nationals are now assisting police in their investigations, including three who are believed to have initiated the SMS messages.
Following reports that there will be another similar assembly this weekend, Police have reminded the public they should not participate in an assembly or procession that does not haveapermit as it is an offence to do so. - CNA
Posted by Mr. Programmer at 9/01/2007 07:26:00 PM0comments
ဘတ်စ်ကားခ မတိုးရန် မထသ ညွန်ကြား၊ မလိုက်နာသူများရှိနေ
ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်အစိုးရက ရန်ကုန်ရှိ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားခ အချို့ကို ယခင်နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
“ချထားတဲ့ ကားတွေက သီးသန့်တွေ၊ ချက်ပလက် ဗိုက်ပူတွေ၊ ကေအမ်ဟီးနိုးတွေ၊ ကားလတ် ဒိုင်နာတို့တွေပေါ့ ကျပ် ၅၀ က စပါတယ်။” ရန်ကုန်တိုင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးဌာန အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမ သို့ တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ပြောပြသည်။
သို့သော်လည်း ဘတ်စ်ကားများ တိကျစွာ လိုက်နာမှုမရှိဘဲ အနည်းဆုံး ၅၀ ကျပ် သတ်မှတ်ချက်ကို အနည်းဆုံး ၁၀၀ ကျပ် ကောက်ခံလျှက် ရှိသည်။
“ရန်ကုန်မြို့တွင်းက ၂၀၀ ပါ။” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ တက်သွားပြီးနောက် ဘတ်စ်ကားခများ တိုးမြှင့် ကောက်ခံ လာခဲ့ကြရာ ယခင်က ကျပ် ၂၀၀ ကောက်ခံသည့် လမ်းကို ကျပ် ၅၀၀ ကောက်ခံ ခဲ့ကြသည်။
Posted by Mr. Programmer at 8/23/2007 05:29:00 PM0comments
မာဒေးကားဖလားပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံ မြန်မာအသင်းနိုင်ပွဲဆက်
၃၉ ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ဩဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့က ဆက်လက်ကျင်းပရာ လက်ရှိချန်ပီယံ မြန်မာက အိမ်ရှင် မလေးရှားကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့်ထပ်မံအနိုင်ရရှိသွားပြီး အကြှိုဗိုလ်လုပွဲသို့တက်ရောက်ရန် သေချာသွားပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့် မလေးရှားတို့အုပ်စု ဒုတိယပွဲစဉ်တွင် မြန်မာအသင်းအတွက် ဂိုးများကို ပထမပိုင်း ၄၁ မိနစ်တွင် အောင်မျိုးသန့်နှင့် ဒုတိယပိုင်း ၆ မိနစ်တွင် ရန်ပိုင်တို့က တစ်ဂိုးစီသွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မလေးရှားတို့ နှစ်ဂိုးပြတ်ရှုံးနေရာမှ ချေပဂိုးရရေးအရှိန်မြှင့် တိုက်စစ်ဆင်ကစားလာရာ ၆၉ မိနစ်တွင်မို့ဒ်ဇာကွန်းအာဒါက ချေပဂိုးတစ်ဂိုး ပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ပထမပိုင်း မိနစ် ၄၀ တွင် မလေးရှားတိုက်စစ်မှူး မို့ဒ်ဆာဖီဆာလီက မြန်မာခံစစ်မှူး ဇော်လင်းထွန်း အားကြမ်းတမ်းစွာ လူချကစားသဖြင့် ထိုင်းကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီး ချိုင်ယာအလီမာဟာပက်က တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြထုတ်ပယ်ခဲ့ရာ မလေးရှားတို့ ၁၀ ယောက်ဖြင့်ကစားသွားရသည်။
မြန်မာအသင်းသည် အုပ်စု(က)တွင် လာအိုနှင့်ကစားရန် တစ်ပွဲကျန်သေးသော်လည်း၂ ပွဲနိုင် ၆ မှတ်ဖြင့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲသို့တက်ရန် သေချာသွားပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် ဩဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် လာအိုနှင့် အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
အုပ်စု (က) အခြားပွဲစဉ်တွင် လီဆိုသိုက လာအိုကို ၃-၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရသွားသည်။လီဆိုသိုက ပထမပိုင်းမှာပင် ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Mr. Programmer at 8/23/2007 05:04:00 PM0comments
ပြောင်းလွယ်ညွတ်လွယ်သော ဘက်ထရီအချပ်လွှာများသည် လာမည့်မျိုးဆက်သစ်ကိရိယာများ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သုတေသီများက တင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသုတေသီတို့က စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုထက် အနည်းငယ်သာကြီးသော အလင်းရောင်တစ်ခုကို ပေးနိုင်သည့် ၂.၃ ဗို့ရှိ နမူနာပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း သုတေသီတို့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စက္ကူ ၅၀၀ ပါ အထုတ်အရွယ်အစားရှိ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး နောင်တွင်ကားဘက်ထရီအဖြစ် သုံးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျဘက်ထရီကဲ့သို့ စွမ်းအင်သိုလှောင်ထားနိုင်သော ဘက်စုံရစက္ကူဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှုသုတေသီများက ၎င်းစက္ကူဘက်ထရီများသည် အဆင့်မြင့်စွမ်းအားများ အသုံးပြုမှုအတွက် စွမ်းအင်ရုတ်ချည်းပေါက်ကွဲမှု ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော လျပ်သိုတစ်ခုကဲ့သို့လည်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။
သမားရိုးကျဘက်ထရီများတွင် သီးခြားအခန်းငယ်များ ပါဝင်သော်လည်း စက္ကူဘက်ထရီများသည် ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော တည်ဆောက်မှုပုံစံဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသည်။ ပို၍စွမ်းအားပြည့်ဝစေသည်။
Posted by Mr. Programmer at 8/16/2007 11:33:00 AM0comments
ဒီနေ့မန္တလေးမှ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် အင်တာနက်တွင် တွေ့၍စကား ပြောဖြစ်ကြသည်။
စစချင်းပင် သူက ကျနော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အစိုးရက ပြည်သူများအတွက် ၈.၈.၈၈ ကိုဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်ဆီဈေး ၂၅၀၀ကျပ် သို့တိုးမြှင့်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ ဒါနဲ့ သူကမကြာခင် စင်ကာပူသို့လာ၍ ဟောပြောပွဲတက်ရန် လာ မည်ဟုဆိုရာ စိတ်ဝင်စားသဖြင့်မေးလိုက်ရာ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ အကြွေးများဝိုင်းလည် ပတ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ၁၀ရက်အတွင်း သူဌေးဖြစ်နည်းဟောပြော ပွဲကိုလာတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီဟောပြောပွဲ လက်မှတ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ၀ယ်ယူထားရကြောင်း သူကထပ်မံပင်ပြောလိုက်သေးသည်။
ပြီးတော့သူထပ်မံ ပြောသေးသည်မှာ မကြာခင်အတွင်း အသစ်ပြေးဆွဲတော့မည့် ပုဂံအဲယားလိုင်းမှ ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပင်။ ဒါ့အပြင် ထိုအဲယားလိုင်းမှ ပြေးဆွဲမည့်လေယာဉ်များမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ်မဟုတ်။ စစ်တိုက်လေယာဉ်များ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ပုဂံအဲယားပိုင်ရှင်က ကျနော်တို့အစိုးရအတွက် နှစ်စဉ် ခရီးသည်စီး လေယာဉ်ဝယ်မပေးဖူးဘဲ စစ်တိုက်လေယာဉ်များသာ ၀ယ်ပေးနေကြဖြစ်ရာ အကျင့်ပါသွား၍ ဟုဆိုသည်။ မဆိုးပါဘူး အတွေ့အကြုံ အသစ်တော့ရမှာ သေချာသည်။
ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့စကားမပြောဖြစ်တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရာ သူက ရန်ကုန်၌ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင်ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲ ကျင်းပနေလို့ ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ကျနော် ဒီကိစ္စအတွက် တော်တ်ာကို ဂုဏ်ယူမိပါသွားသည်။ တော်တော် အဆင့်မြင့်နေပြီ။ သူကဟုတ်တယ် တော်တော် အဆင့်မြင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ရှိ အခါကြီး ရက်ကြီးများတွင် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်များ အလိုလို နှေးကွေးသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော တစ်နိုင်ငံတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပမှ ဖုန်းများခေါ်ဆိုလျှင်လည်း အီးမေးလ်၊ ဖက်(စ်) များ ပြောလိုမရဟု ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများကို ဤကဲ့သို့ တိုးတက်လာသော နည်းပညာများ မျှဝေခြင်းဖြစ် ကြောင်းပြောကြားပါသည်။
Posted by Mr. Programmer at 8/15/2007 01:31:00 PM0comments
It's from http://www.bethanyroberts.com/BirthdayStory.htm
Once uponabirthday, there wasayoung boy named Mr. Programmer. Mr. Programmer was 29 years old and lived in Singapore, . Mr. Programmer was walking home from Work, thinking about birthday cake and presents. Suddenlyagiant Cheeky jumped out from behindaand pounced on Mr. Programmer! But as he was about to scream for help, Mr. Programmer realized the Cheeky was only licking his face. In fact, the furry kisses tickled! Mr. Programmer giggled and decided to keep the giant Cheeky asapet. And on the way home he decided to name his new pet ''Micky.''
When Mr. Programmer and Micky finally got home, his Mom, Mom, was standing on the front porch. And was she surprised to seeaCheeky following Mr. Programmer home! ''What in world is that?'' cried Mr. Programmer's Mom. ''It'sagiant Cheeky ,'' answered Mr. Programmer. ''I can see that, Mr. Programmer, but what in the world is it doing here?'' ''It's my birthday. Can it be my new pet?'' answered Mr. Programmer. ''Oh, dear,'' said Mr. Programmer's Mom. ''I wouldn't get your hopes up. You know your father doesn't like Cheeky s. But, it is kind of cute. And it is your birthday. I suppose you can keep it while I finish frosting your birthday cake.'' And with that, Mr. Programmer hugged Micky and led his new pet into the house--even though he knew his father would probably not let it stay.
Once in the house, Mr. Programmer and Micky played Age Of Empire, until Mr. Programmer's favorite television show, '','' started. Then Mr. Programmer forgot all about watching Micky. But half way through , Mr. Programmer heard his father, Dad, shout, '' Mr. Programmer ! Get in the ...NOW!!'' Mr. Programmer rushed into the , where his Dad was pointing toward the . ''Look what your new pet did!'' he said. Mr. Programmer looked. There were balloons and streamers, hanging from the ceiling. Mom and Dad were wearing party hats. But right in the middle of the , were the messy remains of the birthday cake! ''I'll clean it up, Dad,'' said Mr. Programmer. ''I'm sorry, Mr. Programmer, said his Dad, ''butagiant Cheeky is notagood pet. You'd better find itanew home.''
So Mr. Programmer looked to see where Micky was hiding. Soon Mr. Programmer found Micky crouched beneath the table where Mr. Programmer did his Music. ''Come on, Micky, you have to go. And hey, don't look at me that way, I'm not the one who ate the cake and madeamess!'' said Mr. Programmer. And Mr. Programmer started to lead Micky out of the house and down to the local Cold Storage. Mr. Programmer knew the store owner would find Mickyagood home. So after hugging Micky and saying good-bye, he thanked the owner of Cold Storage, and walked backed home. Mr. Programmer didn't notice the Cheeky was following! Back home, Mr. Programmer sadly slurped six Milk shakes. But Mr. Programmer's father reminded him about the mess he still had to clean up. Halfway through the clean-up, Mr. Programmer suddenly noticed Micky in the doorway. ''Micky! You're back!'' he shouted. Micky hopped up and down and gave everyone furry, tickling, BIG kisses. Even Mr. Programmer's father giggled. ''I guess that Cheeky can stay,'' said Mr. Programmer's Dad. Micky wasabirthday pet after all! Mr. Programmer's Mom baked another Chocolate cake, and they all celebrated. Whatahappy birthday it was! The End.
Posted by Mr. Programmer at 8/13/2007 10:33:00 AM2comments
စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်တဲ့ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကို ဂျပန်ရုပ်ပြောင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ Hello Ketty ရုပ်ပုံပါ လက်ပတ်ဝတ်ဆင်ခိုင်းပြီး အပြစ်ပေးမယ်လို့ ထိုင်းရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ပစ်တာ တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမှာ ကားရပ်တာ သို့မဟုတ် အလုပ်ခွင် နောက်ကျမှရောက်လာတာတွေ စသဖြင့် မလျော်ကန်တဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ တွေ့ရှိရသူရဲတွေကို ထိုင်းရဲရုံးကြီးက တစ်နေကုန် Hello Ketty လက်ပတ်ပတ်ခိုင်းထားပြီး နေရမယ်လို့ ရဲမှူးကြီးပုန်ပတ်ချာရာဖန်က ပြောပါတယ်။
အသဲနှလုံးပုံပေါ်ထိုင်နေတဲ့ Hell Ketty ပုံဟာ မိန်းကလေးငယ်လေးတွေ စွဲမက်ကြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးဆန်တဲ့ပုံမျိုးကို ရဲတွေလက်မောင်းမှာ ပတ်မထားလိုကြပါဘူး။
အခုလို အပြစ်ပေးခြင်းဟာ ရဲတွေအနေနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးရှက်အောင် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ရဲတွေကိုလည်း ဒီလိုသာ အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲကြီး က လက်ပတ်တွေကို ရဲတိုင်းဝယ်ပေးရမလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒေ၀ါလီခံသွားနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 8/08/2007 01:20:00 PM0comments
အိန္ဒိယရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းတစ်လိုင်းက အဆိုတော်ကောင်းများကို ရှာဖွေနေ ပါတယ်။ သီချင်းဆိုရမယ့် နေရာကတော့ လက်တွေ့သဘာဝ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေ မျက်စိမှောက်နေတဲ့ ရေချိုးခန်းနေရာမှာပဲဖြစ်တယ်။ "ရေချိုးခန်းအဆိုတော်" အမည်ရှိတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကို Filmy ဖျော်ဖြေရေးလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသမှာ ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲက ရေချိုးခန်းထဲမှာ သီချင်းဆိုပြီး ပရိသတ်ကိုပီတိဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အဆိုတော်ကို ရွေးမှာဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များဟာ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ကျောက်ပြားကပ် နံရံ၊ ရေပန်းနဲ့ဘုံဘိုင်ခေါင်းများမှအစ ရေချိုးခန်းနဲ့ ချွတ်စွပ်တူအောင် စီမံပြုလုပ် ထားတဲ့ စတူဒီယိုခန်းထဲမှာ သီချင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်ရေချိုးတဲ့အခါမျိုးလို မဟုတ်ဘဲ အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်လျက် သီချင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်။
Posted by Mr. Programmer at 8/03/2007 10:43:00 AM0comments
လူတွေဘာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံကြသလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းရင်း ၂၃၇ ချက်ကို စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။ လူငယ်အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရင်းနှီးကြရာမှာ တူညီတဲ့ စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သုတေသီတွေက တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ နှလုံးသားချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာထက် တဏှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားအရွယ် ယောက်ျားမ်ိန်းမတွေကတော့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြောင်းပြချက်တွေကိ်ု လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆွဲဆောင်မှုကြောင့်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာချင်းနှီးနှောရတဲ့ အတွေ့အကြုံသာယာလို့၊ အရသာတွေ့လို့ဖြစ်တယ် ဆိုတာတွေပါဘဲ။
ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဩဂုတ်လထုတ် Archives of Sexual Behavior မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက် ၂၅ ချက်က အချက် ၂၀ မှာတော့ ယောက်ျားရော မိန်းမတွေပါ သဘောထားညီခဲ့ပါတယ်။
တက္ကဆက်တက္ကသိုလ် သုတေသီတွေက ငါးနှစ်တာ အချိန်ယူပြီး သူတို့စရိတ်နဲ့ သူတို့ လိင်ကိစ္စနောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိတယ်။ လိင်ကိစ္စအတွက် အချိန်တွေ ဘယ်လိုသုံးနေတယ်ဆိုတာကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို လေ့လာချက်အရ ယောက်ျားတွေက ရုပ်ဝတ္ထုအရသာခံချင်ပြီး မိန်းမတွေက ချစ်မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အယူအဆကို ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ သဘောတွေ့ရပါတယ်လို့ လေ့လာရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တက္ကဆက်တက္ကသိုလ် စိတ္တဗေဒပါမောက္ခ ၀ီဒီမက်စ်တန်က ပြောပါတယ်။
ပါမောက္ခမက်စ်တန်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ အသက် ၁၇ နှစ်ကနေ ၅၂ နှစ်အရွယ်ထိ ယောကျာ်းမိန်းမ ၄၄၄ ယောက်ကို မေးခွန်းများမေးပြီး လိင်ဘာကြောင့် ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း ၂၃၇ ချက်ကို ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလို စာရင်းဇယားတွေရပြီးတဲ့နောက် ကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသား ၁၅၄၉ ဦးကို ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲကနေ သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီးရွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံရတာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပိုပြီးအခွင့်အရေး ယူတတ်ကြတာတွေ့ရသလို အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ သူတုိ့အပေါ်ကို စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ခံယူထားတာ တွေ့ရကြောင်း ပါမောက္ခမက်စ်တန်က ပြောပါတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 8/03/2007 10:34:00 AM0comments
ကလေးတွေ စကားပြောတတ်မှုကို ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုနဲ့သိနိုင်
လူများမည်သို့ စကားပြောဆိုတတ်လာကြကြောင်း ကလေးငယ်တစ်ဦးက ဖေါ်ထုတ်ပြသပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းကဲ့သို့ ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ် တစ်ခုဖြင့် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတို့၏ အသံများကိုလည်း အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့် ကလေးများသည် မွေးဖွားလာကတည်းက ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား အားလုံးရှိ အသံများကို သိနိုင်စွမ်း ရှိသည်ဆိုသော အယူအဆနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိစရာများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မွေးကင်းစကလေးများ၏ ဦးဏှောက်တွင်လည်း ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိဥာဏ်မည်မျှရောက်သည်။
၎င်းဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်သည့်အသိပညာ မည်မျှ ၎င်းကလေးက ရရှိသည်ဆိုသော ပြဿနာများကို ယေဘုယျရည်မှန်းချက် သင်ကြားလေ့လာမှုစနစ်ဖြင့် ရှင်းပြနိုင်ကြောင်း ကာလီဖိုးနီးယား ပါလီအယ်ဖိုရှိ စတန်းဖို့တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာပါမောက္ခ ဂျိမ်းမက်ကလီလန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက၎င်း၏ ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်သည် ကလေးငယ်များက ဘာသာစကား၏ တည်ဆောက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်သည်။
နားလည်သဘောပေါက်သည့်တိုင်အောင် အသံများမှတဆင့် စနစ်တကျ ရွေးချယ်သည်ဆိုသော သီဝရီကို ထောက်ခံနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by Mr. Programmer at 7/29/2007 07:52:00 PM0comments
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ကစ၍ စီစဉ်ခဲ့သော ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် laptop စီမံချက်အရ ယနေ့အချိ်န်တွင် ၎င်း laptop ၁၀၀ တန်များကို အမြောက်အမြား စတင်ထုတ်လုပ်တော့မည်ဟု သိရသည်။
တန်ဖိုးနည်း laptop များကို သန်းနှင့်ချီ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် handware ထုတ်လုပ်သူများက လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို စတင်၍ ထုတ်လုပ်နေကြသည်။
အဆိုပါ စီမံချက်ကို စတင်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းက ပထမဦးစွာ လိုအပ်သည့် laptop သုံးသန်းအတွက် အမှာစာများ ပေးထားသည်။
ပထမဦးဆုံး ထုတ်လုပ်သော laptot များကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ကလေးများ လက်သို့ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု သိရသည်။
သို့သော်လည်း software များကိုမူ ရေးရန်လိုအပ်သေးကြောင်း ကလေးတစ်ယောက် laptot တစ်လုံး စီမံချက် အဖွဲ့အစည်းမှ solftwar ထုတ်လုပ်မှု အကြီးအကဲ Walter Bender က ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by Mr. Programmer at 7/29/2007 07:50:00 PM0comments
နေ့စဉ်အချိုရည် တစ်ကြိမ်ထက် ပိုသောက်သူများ နှလုံးရောဂါရနိုင်
ပုံမှန်သောက်သုံးနေကျ သို့မဟုတ် ဓါတ်စာအဖြစ်နှင့်ပဲဖြစ်စေ တစ်ရက်လျှင် အချိုရည်များ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍သောက်ပါက နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ်တိုးပွားလာစေနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်သုတေသန လေ့လာချက်တစ်ရပ်က တင်ပြထားသည်။
ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှု ရောဂါလက္ခဏာစုများဖြစ်သည့် ခါးအင်မတန် တုတ်လာမှု၊သွေးဖိအား မြင့်တက်လာမှုနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အကြောင်း တိုးပွားလာမှုနှင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများမှတဆင့် ယခုကဲ့သို့ နှလုံးရောဂါအန္တရာယ် ပို၍ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသုတေသနသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ Framinghan Heart Study (FHS) ဟုသိထားသော စဉ်ဆက်မပြတ် ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သူများမှာ မူလစမ်းသပ်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မြေးမြစ်များဖြစ်သည့် တတိယမျိုးဆက်အထိ ရောက်ရှိနေသည်။
အဆိုပါ လေ့လာမှုပြုခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၎င်းစမ်းသပ်လေ့လာမှု မခံရမီက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ CVD သို့မဟုတ် နှလုံးထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် လေဖြတ်ရောဂါလက္ခဏာများ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် မရှိခဲ့ကြချေ။
FHS က ၎င်းတို့ကို ကာလအတန်ကြာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ FHS သည် ယခု National Heart၊ Lung and Blood Institute NHLBI ဟု သိထားသည်။ National Heart Institute ၏ ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင် စတင်သုတေသနပြုခဲ့သည်။
တရက်လျှင် တကြိ်မ်ထက်ပို၍ အဖျော်ယမကာရည်များ သောက်သုံးသူများတွင် ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှု ရောဂါလက္ခဏာစု ဖြစ်ပေါ်မှု အန္တရာယ် တိုးပွားနိုင်ကြောင်း၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်မှ အဆိုပါ လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင် ပါမောက္ခဒေါက်တာ Ramachandran Vasan က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ လေ့လာမှုတွင် လူပေါင်း ၉၀၀၀ ပါဝင်ပြီး လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ယောင်္ကျား၊မိန်းမများ ဖြစ်ကြသည်။ လေးနှစ်တာကာလတွင် အချိန်သုံးမျိုး ခွဲခြား၍ လေ့လာခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ပထမလေးနှစ်တာ ကာလတွင်း သုတေသနပြုလုပ်မှု၌ ပါဝင်သူများတွင် အချိုရည်များကို နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ထက် ပိုသောက်သူများသည် ထို့ထက်လျော့နည်းစွာ သောက်သူများထက် ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှု ရောဂါလက္ခဏာစုများ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
နောက်ထပ်လေးနှစ်တာကာလ ဆက်လက်လေ့လာစမ်းသပ်မှုအရ ပထမအခြေခံ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း အဆိုပါဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှုရောဂါ လက္ခဏာစု မပြခဲ့သူများတွင် နေ့စဉ်အချိုရည်တစ်ကြိမ်နှင့်အထက် သောက်သုံးသူများအနက် ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၎င်းရောဂါလက္ခဏာစု ခံစားရမည့် အန္တရာယ်မြင့်မားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ အန္တရာယ်တွေ့ရှိချက် လက္ခဏာများမှာ-
၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာသည့် အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။( စတုရန်းတစ်မီတာ BMI - ၃၀ ကီလိုဂရမ်)
* ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခါးအလုံးအ၀န်းတိုးပွားလာသည့် အန္တရာယ်ရှိလာသည်။
*သွေးကြောများတွင် striglyeeride များ မြင့်မားလာမှု အန္တရာယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာနိုင်သည်။
သုတေသီများအနေနှင့် သီးခြားလေ့လာရေးအုပ်စုမှ ၎င်းတို့၏ soft drink သောက်သုံးမှုကို လေ့လာရာ၌ နေ့စဉ် ဆိုဒါကဲ့သို့ အမြှပ်ထသောအရည်များကို တစ်ကြိမ်ထက်မက သောက်သုံးသူများတွင်လည်း အဆိုပါ ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှုရောဂါလက္ခဏာစုများ ဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ထို့အပြင် သုတေသီများက အစားအသောက် စားသုံးမှု ပုံစံနှင့် ရောဂါလက္ခဏာဆက်စပ်မှုတို့ကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကြသည်။
အချိုရည်များကို သောက်သုံးလေ့ရှိသူများသည် ချိုသောအစားအစာများကို ပို၍စားသုံးတတ်လာပြီး insulin မတိုးနိုင်သော အချိုဓါတ်များ ပို၍များလာကာ ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ် ပိုရှိလာနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။
Posted by Mr. Programmer at 7/29/2007 07:45:00 PM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်က အလုပ်ရှာနေတဲ့ အသိတစ်ယောက် က သူသွားရောက်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးများ အကြောင်း ကိုပြောရင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှ သူကို Technical Test တစ်ခုဖြေခိုင်း လိုက်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ ဘယ်လို Test လည်းလို့ မေးကြည့်တဲ့ အခါမှာ့ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကောင်းမှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ site မှာ အခုလောလောဆယ် ပရိုမိုရှင်း ရှိနေပြီး Free Test များ ရှိနေပါတယ်။
ရမှတ် ၂.၇၅ အထက်ရရင်တော့ Certificate ကိုမှာကြားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ site name လေးကတော့ www.brainbench.com ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 7/25/2007 03:46:00 PM3comments
ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုကို အထူးပြုခြင်းသည် အမျိုးသားရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းသားများမှာ စာသင်စရိတ်ကြီးမြှင့်မှုနှင့် Goods and Services Taxs GST မြင့်မားလာမှုဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ စင်ကာပူတွင် GST ၇ ရာခိုင်နှုန်း တက်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူအမျိုးသား တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသင်တန်းစရိတ်များမှာ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်လိုက်သည်ဟုဆိုသည်။
၎င်းနှင့် နှိုင်းစာပါက နန်ယန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် စင်ကာပူစီမံခန့်ခွဲရေး တက္ကသိုလ်တို့ကမူ ယခုနှစ်အတွက် ၎င်းတို့ကျောင်းစရိတ်များ တက်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ စင်ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် NUS က ၎င်း၏ ကျောင်းကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်ထားပြီး ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် စာသင်စရိတ်များ တိုးမြှင့်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
NUS တိုးချဲ့တက္ကသိုလ်ကို ပီနန်လမ်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိရာ Park Mall အဆောက်အဦးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
NUS Extension ၏ လက်ရှိကျောင်းသားများကိုမူ ပြင်ဆင်သည့် ကျောင်းစာသင်စရိတ် ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၃၀ ရက်မတိုင်မီ ငွေသွင်းထားသူများကိုမူ ယခင်နှုန်းထားအတိုင်း ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပြန်လည်၍ ထုတ်မပေးသော မှတ်ပုံတင်ကြေးသစ် ကောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပြဿနာဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်လာ ၇၀၀ ထိ သွင်းရသော ဘာသာရပ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ဒေါ်လာ ၅၀ သတ်မှတ်ထားပြီး ဒေါ်လာ ၇၀၀ အထက်ပေးရသော သင်တန်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၂၀ ပေးဆောင်ကြရမှုကို ကျောင်းသားများ မကျေနပ်ကြဟုဆိုသည်။
သို့သော်လည်း NUS Extension က ၎င်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာ၌ ယခင်က အချို့ကျောင်းသားများသည် မှတ်ပုံတင်ကြေးမပေးရဘဲ သင်တန်းတက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းမှနှုတ်ထွက်မှု၊ သို့မဟုတ် အတန်းမတက်ဘဲ နေခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းအနေနှင့် ပြင်ပမှ ဆရာများ ငှားရမ်းရမှုစရိတ်များ၊ သင်တန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အကုန်အကျ ခံခဲ့ရကြောင်း NUS ကတင်ပြခဲ့သည်။
Posted by Mr. Programmer at 7/19/2007 10:11:00 AM0comments
ယခုနှစ်အတွင်း ကြော်ငြာအများစုတွင် သူ့ပုံရိပ်တွေက အများစုနေရာယူထားသည်။ ထို့အပြင် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ဝေထွက်ရှိလာသော ပုံနှိပ်မီဒီယာအားလုံးလိုလိုတွင်လည်း သူ့အကြောင်းမျက်နှာဖုံးတင်ကြ၊ ရေးသားကြနှင့် အထူးအလေးပေးဖော်ပြခြင်း ခံနေရသည်။ သူကားအခြားမဟုတ်။
လောလောဆယ်တွင် ပရိတ်စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံး၊ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးသရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုပင်ဖြစ်သည်။ မိုးဟေကိုနှင့် ပက်သတ် သောကောလဟာလအချို့က ပရိသတ်အကြားတွင် တောမီးပမာ ပျံ့နှံ့နေသည်။
The Voice Weekly ကမိုးဟေကို ၏ ကောလဟာလအပေါ်ရှိသည့် အမြင်သဘောထားကို သိရှိရန်ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က ပုလဲကွန်ဒိုရှိရှူတင်ရိုက်ကွင်း တစ်ခုသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
The Voice: အနုပညာလောကထဲကို လယ်နှခုနှစ်ထဲက ဝင်ရောက်လာတာလဲ။
မိုးဟေကို : ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်ကပါ။
The Voice: အခုချိန်မှာ ကျေနပ်နိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရရှိနေပြီလား။
မိုးဟေကို : အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အများကြီးလိုနေပါတယ်။
The Voice: နှင်းဆီသခင်အငြိမ့်မှာ မိုးဟေကို အငြိမ့်ကမယ်လို့ ပရိသတ်တွေသိထားပြီးမှ ဘာဖြစ်လို့မကဖြစ်တာလဲ။
မိုးဟေကို : နှင်းဆီသခင်အငြိမ့်မှာကြော်ငြာထားပြီးမှ မပါဖြစ်တာ အငြိမ့်မှ မကတတ်တာ။ ပြီးတော့ ကိုယ်မပိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်ချင်ဘူးလေ။ အငြိမ့်မကဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအာဖြင့် အမျိုးသမီးဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
The Voice: ဒီအငြိ်မ့်ကဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်မရလိုက်တာလား။
မိုးဟေကို : ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကြော်ငြာထားပြီးမှကဖို့သိရတာ၊ အကသင်ဖို့အချိန်ကလည်း အတော်ကပ်သွားလို့ပါ။
The Voice: အကသင်ပြီးသွားရင်အငြိမ့်တွေကဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
မိုးဟေကို : မရှိပါဘူး။
The Voice: ပြောချင်ရင်ပေါ့အပြင်မှာ ထွက်နေတဲ့ကောလဟာလတွေကို ဘာများပြောချင်ပါ သလဲ။
မိုးဟေကို : ဘာမှပြောစရာအရှိပါဘူး။ ပြောဖို့မှမလိုတာ။
The Voice: ဒီကောလဟာလနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိုးဟေကို ဘာပြေချင်လဲ။
မိုးဟေကို : ကိုယ် ဘာပြောရမှာလဲ၊ ပြောစရာမရှိပါဘူး။
The Voice: လက်ရှိဘာတွေလုပ်နေပါသလဲ။
မိုးဟေကို : ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအတွက် ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတယ်။
Posted by Mr. Programmer at 7/19/2007 10:07:00 AM0comments